ukubuya kukaYesu ngaphambi kwembandezelo | Apg29
Ngelo uXwilo, uYesu uza kuba ibandla lakhe xa ifika ekupheleni kwembandezelo, uza nebandla lakhe.
Kanye njengokuba ibandla kwaba yimfihlo phendla uPawulos, ngokunjalo nayo ayobe, imfihlelo leyo kutyhilwa kuthi. Igama lesiGrike elithi ngasese "Mysterion" apho huvudbetydningen yi "into entsha ngokupheleleyo yaye akubanga ngaphambili."
A ukuziphendulela kuba Pre-trib
E n umbuzo abantu abaninzi bayazibuza ngokunxulumene ukubuya kukaYesu ayobe amakholwa kuya kwenzeka nini? Sithetha ezintathu fixes ezahlukeneyo umba: imfundiso pre-trib, imfundiso eliphakathi-trib kunye nemfundiso post-trib. Oku kuza kuba ukuzilandulela imfundiso pre-trib. Oko kukuthi, ukuba ayobe amakholwa kwenzeka phambi kokuqala imbandezelo.
Ngokuphathelele ukuza kukaYesu izinto ezintathu esimele sahlukane. Yeyona icebo likaThixo yeCawa, uSirayeli kunye neentlanga. Imposiso thina senze kukuba sinxulumana izithembiso zikaThixo kunye nezicwangciso amaSirayeli, kuba ibandla. Xa ibandla kuthatha indawo kaSirayeli icala kuya kuba kubi. Kufuneka ukwahlula xa uThixo ethetha kwaSirayeli xa uThixo ethetha ebandleni.
P kwixesha umthetho oonyana bakaSirayeli, abathwali ezizodwa icebo likaThixo losindiso. eyinhloko GT kaThixo uKristu, ekufikeni kwakhe ebukumkanini bakhe - ezithandekayo, uBukumkani wathembisa, apho liya kuba amaSirayeli iziko labantu, nelizwe lakwaSirayeli neYerusalem iya kuba liziko iziko koMhlaba zejografi, ezopolitiko kunye ngokomoya apho.
umthetho weNkosi uya kuphuma eZiyon, kunye namazwi akhe evela eYerusalem, yaye iintlanga ziya kugxalathelana ukuya kuyo. Ubulungisa, uxolo, nosindiso luza kubakho kulo mhlaba, kule ebukumkanini uxolo, naye Millennium.
A iintlanga TT uya kusindiswa, njengoko njengesiphumo redress uMbuso kaMesiya ngoko ke akukho imfihlelo GT. Kodwa ke uNdikhoyo walungiselela ulawulo eyodwa iintlanga, ngokuthumela uMoya oyiNgcwele emhlabeni, ukuze ukhethe kubantu wasezulwini ezilungileyo zikaThixo ubabalo yona ilibandla, kwaba yimfihlo ngelo xesha. Ngoko ke, oko nayo ibandla okhankanywe kwiTestamente eNdala, kwaye umda kakhulu ekufundiseni kaYesu.
Le mfihlelo emangalisayo ukuba iintlanga baba ziindlalifa kunye izithembiso zikaThixo, wapasiswa kuqala ngumPostile uPawulos, naye waba ngendlela ekutyhilekeni kweNkosi. (Efe 3: 3-6, Kol 1: 25-27). UMoya oyiNgcwele kunye eBandleni ndawonye olu qoqosho. UMoya oyiNgcwele bolig abasisigxina abathembekileyo, intliziyo yebandla, kwaye isibambiso selifa lethu uppryckelsens ngosuku olulandelayo.
Ixesha Assembly thina na uyitempile yoMoya oyiNgcwele, itempile kuphela uThixo uyazi ehlabathini namhlanje. Ukuba uMoya oyiNgcwele uye wahlala yakhe emhlabeni, ngaba ngokwenene isiphelo, nto leyo ukuthintela Umchasi ungakwazi ukumelana up.
UYesu Kristu ISityhilelo - Kuya kwenzeka ngokukhawuleza emva
Phezulu 1:19 - Bhala amagama phantsi izinto enizibonileyo ntoni na nokuba yintoni na kubakho emveni koku.
O Rdet "emva koku" ilizwi lesiGrike meta tauta, gama elo elithetha "emva kwezi zinto" .
Le ivesi engundoqo candelo lonke yeSityhilelo yabhalwa. Emva koko uYohane uye wavunyelwa ukuba nanko umbono wasezulwini uYesu, lowo ufunda ukuba umele ubhale phantsi:
1. Ukuba umbonile. 2. Yintoni 3. kufuneka ntoni emva koku. Ngamanye amazwi omnye amathathu kwisahlulo esabelana kwiSityhilelo.
1. Oko akubonileyo
Ku isahluko 1: 12-16 ubona uYohane wabona uYesu emi phakathi kweziphatho zosixhenxe zegolide (kwa mabandla 7), kunye iinkwenkwezi ezisixhenxe esandleni sakhe (7 mabandla zezulu). Ubona uYesu, naye ke uNdikhoyo uloyiso Vukile of Calvary. Yena uyayibona njengoko uNyana edunyiswa woMntu, njengoko imvana, ingonyama wesizwe sakwaYuda, lowo mkhulu umgwebi, uKumkani wookumkani neNkosi yeenkosi.
D t ngamagqabantshintshi ngexesha leNdibano urskillnings, ngokusekelwe timeline lesiprofeto nembali, bonke ngokuzalwa ibandla ukubuya kukaYesu. 7 ileta omelele ibandla kunye zazivelela yayo yokomoya ukutyhubela iminyaka noxhwilo elandelayo.
Ileta yokuqala eyayithunyelwe bebandla lase-Efese emele ibandla okokuqala, oko kukuthi iminyaka labapostile. I anesixhenxe yokugqibela ileta kwibandla baseLawodike. Ubumnyama lokomoya kuchaziwe kule leta inkcazo kwi ngexesha lokugqibela kakhulu kokuba uJesu ubuyela. Bandla eliseLawodike kaThixo lokuphela kwexesha ecaweni.
3 Kwaye yintoni iqokobhe kubakho emveni koku
O Rdet "emva koku" ilizwi lesiGrike meta tauta, gama elo elithetha "emva kwezi zinto" . Okt ngokulandelana emva kuphelalwa kwamabadla, enikwa ngokusebenzisa unobumba-7.
Rev 4: 1 - KUDALA (oko kukuthi, xa ixesha Assembly emhlabeni phezu, kwaye its been amandla ngokupheleleyo), ndabona, nanko, zibhubha ivulekile ezulwini, yaye kuqala kwafuneka ilizwi weva lithetha nam, ngathi lelexilongo , wathi: " Nyukani , ndiza kukubonisa kufuneka ube yintoni emveni koku." (oko kukuthi, emva kweminyaka yecawa) kANYE ndafika kuMoya; nanko kumi itrone wayemi emazulwini, lwaolo lwahlala phezu kwetrone.
Nantsi Assembly ayobe-1 Tesalonika 4:16, efana isityhilelo uYohane wafumana. A ngezwi elikhulu, ixilongo likaThixo kunye ayobe. A parallel ezithandekayo! UYohane kokuba ngomoya ubone icawa elixwiliweyo ukuba limelwe abadala abangama-24 zijikeleze itrone.
Sifumana "screanshot" wasezulwini kwiSahluko 4 no-5, eliyimini esemva kwaleyo ayobe, kodwa ngaphambi kwembandezelo emhlabeni. Ukususela kwiSahluko 6 sibe emva Emhlabeni, noYohane ubona le ntaka iliso imboniselo imbandezelo babedlala out on Earth kwiSahluko 6-19.
Abadala 24 zijikeleze itrone
T reviously ke wathi ukuba abadala abangama-24 na ibandla ukuba bubonakaliswe ayobe phambi kokuba imbandezelo esibhakabhakeni. Sinako baqale zokulinganisa ulwazi olufanayo zimalunga abadala abangama-24 kunye nezithembiso kwiNdibano:
Ehleli phezu kweetrone (Rev 4: 4.11: 6
Yiba ezinde ezimhlophe (ISityhi 4: 4)
Crown phezu kwentloko yakhe (ISityhi 4: 4,10)
Ingaba ookumkani (ISityhilelo 5:10
Ababingeleli (ISityhi 5:10)
Zobukhosi (Mateyu 19:28, ISityhilelo 3:21
iimpahla ezimhlophe (ISityhilelo 3: 4-5)
Crown (1 iinkomo 9:25, Lane 4: 1.2)
Ngaba ookumkani (Rev 1: 6, 2:26, ​​20: 6)
Ngaba ababingeleli (Rev 20: 6)
Ngo-ISityhilelo 5: 9, ngoko kuvuma abadala abangama-24 ingoma entsha kuKristu kunye imvana umbingelelo:
ivesi 9 Bathi, bevuma ingoma entsha: "Ufanele ukuyithabatha incwadi, nokuwavula amatywina ayo; Ngokuba wahlatywa kuwe, uze uthenge ngegazi lakho uThixo abantu bevela kuzo zonke izizwe, neelwimi, nabantu, neentlanga. V.10 Wena wenza babe bubukumkani nababingeleli kuye uThixo wethu; kwaye baya kuba ngookumkani phezu komhlaba. "
S izihlandlo ezininzi ngaphambili, kuye kwabakho iimpazamo nguqulelo evela kwimibhalo yantlandlolo yesiGrike. Phakathi kwezinye izinto, le Ke ngokusekelwe uninzi okubhaliweyo yamaGrike luguqulwa ngathi oku endaweni yoko:
ivesi 9 Bathi, bevuma ingoma entsha: "Ufanele ukuyithabatha incwadi, nokuwavula amatywina ayo; Ngokuba wahlatywa kuwe, uze uthenge kwethu igazi lakho uThixo kuzo zonke izizwe, neelwimi, nabantu, neentlanga. V10 Wasenza ookumkani nababingeleli kuye uThixo wethu; Sasiya kuba ngookumkani phezu komhlaba. "
D e abadala abangama-24 ukuchonga ngokwazo kunye namakholwa, yaye ngoko ke bonke abantu ngentlawulelo abaye usindiswe ngokukholwa kuYesu Kristu emhlabeni. Bona esibhakabhakeni ukuqala ukusuka imbandezelo sele xa kuqala ekuqaleni itywina.
1 Korinte 15:51 - Yabonani, ndinixelela imfihlelo: zonke ubuthongo Asiyi, kodwa siya kwenziwa ngakumbi sonke, ngephanyazo, xa nakusekuqhwanyazeni kweliso, ngexilongo lokugqibela.
P recis ukuba icawa kwaba yimfihlo phendla uPawulos, ngokunjalo ayobe, imfihlelo leyo kutyhilwa kuthi. Igama lesiGrike elithi ngasese "Mysterion" apho huvudbetydningen yi "into entsha ngokupheleleyo yaye akubanga ngaphambili."
Asifumani Akukho häntydningar ukuba ayobe kwi OT, yaye oko kuthetha ukuba uYesu akazange afundise ayobe, kodwa ebonakalayo kuphela ukuza kwaSirayeli. Ayobe imfihlakalo ecaleni uPawulos lidlulisela ngakumbi isityhilelo uThixo uyiphathisiweyo kuye. UXwilo achazwe 1 Kor 15 no 2Thes yesibini
Kwiveki yama-70 yeminyaka
P rofetian kaDaniyeli ubandakanya seeveki 70 nto leyo umzobo betydningsfull of lwexesha kaSirayeli yimbali esiprofeto, elisuke ngokupheleleyo ekuthinjweni eBhabhiloni ekuzeni njengoMesiya kaSirayeli bukaKristu yesibini.
Dan 9:24 - ezimashumi asixhenxe iiveki abantu bakowenu, nomzi yakho engcwele ukuphelisa bezityholo, nitywine izono, kucanyagushelwe ityala, mawuvelise bubulungisa obungunaphakade, gcwalisa umbono kunye nesiprofeto, uthambise kakhulu oyiNgcwele.
Kwiveki 70 kanye yokugqibela eyi kunye namaSirayeli kunye nabantu bamaJuda ukuyenza hayi ibandla. E Dan 9:24, siyabona ukuba zonke iiveki 70 zeminyaka ubambene nabantu abangamaYuda baseYerusalem ukuba benze. Kanye kwiiveki zokuqala 69 zange abe nantoni na ebandleni ukuba benze njalo ongenayo kwiveki yokugqibela zeminyaka kunye nebandla ukuyenza.
D ngeveki yokugqibela kweminyaka leyo kwakhona imbandezelo njengoko kuchaziwe kwiSahluko Up 6-19, kwaye isenzo kaThixo kaSirayeli kunye nale host. Ibandla ke isibiyeli leyo imi phakathi 69th kunye kwiveki yama-70 yeminyaka, elichazwa kwivesi 26 - kodwa ukuphela uza ngonogumbe. Okulandelayo ukuya ekupheleni, kuya kuba yimfazwe. Ngomonakalo uzimisele.
UThixo ukugqiba inkqubo neCawa noSirayeli phambi kokuba uye sazaliseka imibutho amalungiselelo kunye nabo.
iphela ubudala Church
A lltså uThixo, phambi kokuba siye kwiveki edlulileyo, ukugqiba into esiyibiza ubudala ecaweni, eyaqala ngePentekoste, kwaye kuye kwaqhubeka kwiminyaka engama 2,000. Xa uThixo ngelaphela kuphelalwa kwamabadla, uThixo ukuqhubeka 'inkqubo noSirayeli. "Lwabo
umnqophiso wakhe bakaSirayeli azaliseka kuphela kule minyaka isixhenxe idlulileyo isiprofeto sika Daniyeli senzeke. Xa izithembiso zikaThixo kuSirayeli inemiqathango yenu, ukuba uThixo ngubani na ukuziphumeza. KweyabaseRoma isahluko 11, uPawulos uchaza ukuba uThixo Kufuneka iphele inkqubo yalo kunye nebandla phambi kokuba uyakwazi ukuqhubeka icebo akhe ndawonye namaSirayeli.
IZenzo 15:14 -16 - USimon lo wachaza ukuba wathini na ekuqaleni uThixo waqinisekisa waphumelela isizwana segama lakhe phakathi kweentlanga (NT-Assembly). Luhambisana amazwi abaprofeti, esithi: Emva koko ke cool ndiya kubuya ndize ndiwakhe umnquba uwe kaDavide.
V ekuboneni ulamlo olulandelelanayo yekaYakobi. Okokuqala kwafika kuphelalwa kwamabadla, yaye ngoko, yena ndoyakha kwakhona intente uwe kaDavide.
Imbandezelo kulungiselelwa bakaSirayeli phambi Millennium. USirayeli uya kukwazi ukukhetha phakathi Umchasi noKristu. Ebudeni ijaji bembandezelo uThixo kaSirayeli ngoxa umema abantu samaJuda umbuso kaMesiya. ingqumbo kaThixo uya kumbuyisela uSirayeli kunye neentlanga kuye baza baguquka.
Usuku iNkosi uYesu Kristu namhlanje
Apha sijonga i-NT Church, ngokukodwa ngexesha ayobe iNdibano kukuba of betydning enkulu ukuba siyazi umahluko ngomhla weNkosi uYesu Kristu namhlanje. Xa Ingqiqo yokuqala, isenokuba ngathi loo nto sithetha imini, kodwa inyaniso kukuba kule mihla "ezimbini" ezi lomlinganiswa ezahlukeneyo ngokupheleleyo yaye isiqulatho ezahlukeneyo ngokupheleleyo kwixesha lokuphela.
Zeph 1: of 14-16 - imini kaYehova enkulu ikufuphi, kufutshane, kwaye uya ngokukhawuleza. Phulaphula, yiyo le imini kaYehova! Ke nikhe ngamaqhawe ixhala. A ngemini yengqumbo na ngaloo mini, yimini yokubandezeleka nokuxinezeleka, yimini Yimbuqo senkangala, imini yamafu inkungu, imini xa enesandi sezigodlo kunye noqhankqalazo kuhlatywa umkhosi murtornen ezinqatyisiweyo ...
2 Tesalonika 2: 2 - Xa kuziwa iNkosi yethu uYesu Kristu, nokuhlanganiselwa kwethu Kwahlanganisana kuye, siyanicela, bazalwana, ukuba alahlekelwe ngesiquphe isikhundla sakhe yaye ningothuswa, nangantoni na ngomoya okanye ngelizwi okanye ileta, olubonakala ngathi kuthi kwaye isekelwe ifikile imini yeNkosi.
N ke imini yeNkosi, ukuba, ingqumbo kunye domstid eya kuphuma phezu komhlaba kwixesha ixesha ukususela ayobe (isiqalo imbandezelo) kunye Millennium. UYesu Kristu namhlanje sekeriweke kwiTestamente eNdala, njengoko anabo imfihlelo yokwenene ukuze, oko kukuthi, inyaniso webandla NT, kwaye ayobe uzuko.
UYesu Kristu namhlanje kuphela isityhilelo NT. Day yeNkosi ayikho nje isityhilelo OT, kodwa dommens ixesha weentlanga icwangciswe ngakumbi kwi-NT kwaye ingakumbi esichazwe kwiSityhilelo isahluko 6-19. "Imini kaNdikhoyo" ngokuphathelele umhlaba kunye nabantu emhlabeni xa uYesu Kristu namhlanje ngokuphathelele Assembly NT ayobe kanye nokulungiselela phambi koBawo osemazulwini.
Xa kuziwa uYesu Kristu namhlanje, yinto benämnelse ngosuku xa uYesu uza kuza phezu kwamafu ukufumana ibandla lakhe amandla ngokupheleleyo kuye.
Filipi 1: 6 - Ndiya Ndiqinisekile ukuba lowo wawuqalayo ngaphakathi kwenu umsebenzi olungileyo, kufuneka kwakhona wowufeza, ide ibe yiloo mini kaYesu Kristu.
B etydningen kule vesi kukuba uMoya oyiNgcwele ngePentekoste waqalisa umsebenzi wakhe ngokukhetha abantu ezulwini, uya kuthabatha ngokupheleleyo kwaye wenze le bantu amandla ngokupheleleyo ecaleni uYesu Kristu namhlanje, ukuba ecaleni uYesu ukuba yoyigodusa ibandla lakhe wasezulwini zokuhlala - leyo ke lwenzeka phambi kokuba ifike imini yeNkosi.
2 Tesalonika 2: 1-12 - The ibandla eTesalonika bothukile ngabafundisi bobuxoki ukuba uYesu wayesele ebafundise ukuba imini yeNkosi, nayo yonke ukuba ithetha umsindo nembandezelo ukuba sele iqalile. Lize Kubonakala ngathi umntu wathumela iileta inkohliso futhi wazinikela kuPawulos, ukunika ileta yesigunyaziso. UPawulos uyalumkisa ngamandla nxamnye le mfundiso zobuxoki, kwaye uqalisa ukufundisa inyaniso ngale "imini yeNkosi".
Okokuqala, uPawulos-1 Tesalonika 1:10 wathembisa ibandla ukuba uYesu uza Kuwasindisa kumbuso kuyo ingqumbo ezayo, kutheni eye yakhamnqisa nkqu yabo lukhulu xa ngequbuliso bacinga ukuba aba phakathi kwayo. UPawulos kubenza edlulisela ibandla ukuba imini yeNkosi ayikwazi ukuqala phambi kokuba umntu wesono, ukuba umchasi ziye kuqala kuvelile, yaye kubonisa ukuba oku kwenziwa ngaphambi "ezibambe" liye kuqala wazitshayela endleleni. (Ukususwa Okokuqala), translation Danish)
Ngubani okanye yintoni ebambe umva?
V ba- 4-8 kukuxelela Kristu, nalowo uphethe naye ukuze akanako ukuza phambili. Namhlanje, thina ubhale 2013, kwaye sinokugqiba ukuba / yena lowo uzibambileyo emva isekhona apha xa umchasi-asifikanga phambili noko. Yintoni egcina uphinde abe zombini kuchazwa ngokuthi "nto" yaye "yena". Umoya ilizwi ngoMoya oyiNgcwele elithi "pneuma" ngesiGrike. Kukho ilizwi intetkön.
Into yokuba uMoya oyiNgcwele ngaxeshanye uThixo, nguye uchazwa ngokuba "yena". Kukho lwesimo emininzi into ebambe Kristu, kodwa omabini neuter ngexesha sobudoda kubakho ngaphandle ngoMoya oyiNgcwele. UMoya oyiNgcwele ngokusondeleyo ukuya ecaweni, yaye ukususela ngomhla wePentekoste e kwiZenzo 2 In GT kwabonakala uMoya oyiNgcwele phezu komhlaba, kodwa endaweni ukusuka phezulu. Kanye njengoko uya kwenza kwimbandezelo.
D uMoya oyiNgcwele uza kwimbandezelo iya kuqhubeka ukusebenza ebantwini kodwa mzuzu uppryckelsens ngaphezulu. Ngoko ke musa ukubona ukuba uMoya oyiNgcwele omelwe kwiSahluko 3 yeSityhilelo ncwadi. Oonobumba ukuba amabandla asixhenxe, siva la mazwi: Lowo uneendlebe zokuva makeve into ayithethayo uMoya kuwo amabandla. Emva kwiSahluko 3, nto leyo ayobe iNdibano kukuba akusekho uMoya oyiNgcwele othetha. ISityhilelo 13: 9 - Lowo uneendlebe zokuva, makeve . Yaye uMoya oyiNgcwele okubangelwa usindiso ezahlukeneyo umyalezo umgwebo kubantu ngayo imbandezelo, kuya kwenziwa ziingelosi. ( Rev 14: 6-7 ).
Xa iNdibano siye ubanjwe uMoya oyiNgcwele akanayo nendawo ukusebenza ukusuka ngaphezulu koko iNdibano kuphela itempile uThixo uyazi namhlanje. (1 3:16). Icawa kuphela ukuba imelwe imbandezelo skökoförsamlingen, kwaye wanga uMoya oyiNgcwele akusebenzi ukusuka.
Inkunkuma okanye ukuhamba?
2 Tesalonika 2: 3 - ..Ty kuqala, inkunkuma kufuneka eze kwaye umntu wesono, unyana wotshabalalo; ekuhleni eze phambili
D igama et ngesiGrike iguqulelwe inkunkuma, igama elithi "apostasia". Isibizo "apostasia" lisuka kwisenzi "afistemi" ogama huvudbetydning ukuba "ukuhamba" okanye "ukuba into ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye." Eli gama lisetyenziswa ingakumbi ngokunxulumene nayo nayiphi na ehamba ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye, okanye ukuba ahambe okanye yahlukile umntu.
Igama kwakhona isetyenziswe ngokunxulumene ukuhendwa yonqulo okanye inkunkuma uchazwa Tim 1 4: 1. Abanye abaguquleli beBhayibhile obuProtestanti kuqala bakhetha ukuguqulela igama elithi "imfuduko" IsiNgesi, nto leyo ethetha ukuba ndimke okanye shwaka.
Ezinye umguquleli weBhayibhile ezaziwayo-kakuhle ngakumbi abo eliguqulelwe amagama iphela / hamba ziquka Kenneth Wuest, Genovabibelen, uJohn Dawson, Coverdale, Crammer njl Ngaba ungathanda ukuba umguquleli wasebenzisa igama elithi "imfuduko" endaweni inkunkuma ngokuqinisekileyo uya kunika ingcaciso enkulu kakhulu ngokunxulumene ayobe kanye nembandezelo. Ifuna kwakhona ukunika indlela eninzi ngaphezulu ngokunxulumene nokuqonda blir ukusuka omabini Tesalonika 1 no-2 kwabaseTesalonika.
Assembly akuyi kungena imbandezelo okanye ubunzima ingqumbo kaThixo
Zizibetho zosixhenxe zokugqibela iphela imbandezelo kunye ingqumbo kaThixo. Ku Tesalonika 1: 9-10 ziye thembisa ukuba silinde ukuba uYesu ezulwini (ayobe), ngokufanayo oluye osihlangulayo kuyo ingqumbo ezayo.
1 Tesalonika 1: 9-10 - kwaye nilinde uNyana wakhe evela emazulwini, athe uThixo wamvusa kwabafileyo, uYesu lowo osihlangulayo kuyo ingqumbo ezayo.
1 kwabaseTesalonika 5: 1-9 - v.2 uyazi kakuhle ukuba imini yeNkosi (ingqumbo / imbandezelo) iya kufika njengesela ebusuku. V.9 - kuba uThixo akazange amisele ukuba ukubandezeleka ingqumbo kodwa ukufumana usindiso ngayo iNkosi yethu uYesu Kristu.
D icandelo elinye siye nje ukufunda umdla kakhulu. 1 Tesalonika isahluko 4:13 phambili imalunga Assembly ayobe kanye kuqubisana noYesu esithubeni. UPawulos ubeka emva ayobe ngokunxulumene ngembandezelo ziza kuchazwa kwiSahluko 5: 1-3.
Uqhubeka ukuchaza ngaloo mini, ukuba imini yeNkosi akakwazi isothuse njengesela kuba thina ukukhanya. Agcine konke oko eqinisekisa ukuba imbandezelo ke yanifundisayo, kwaye iqinisekisa ukuba akukho Shell ingqumbo, kodwa usindiso ngoYesu.
F iwadi Philadelphia, omele omnye wâbo bafundi babini iicawa lokuphela kwexesha zaye wathembisa ukuba igcinwe ndikusindise kwilixa lokulingwa, eliza kuza phezu kwelimiweyo liphela. Esi sithembiso yenye izithembiso kakhulu ukuba ibandla elixwiliweyo wabamba kwiveki yokugqibela leminyaka.
ISityhilelo 3:10 - Ngokuba waligcina ilizwi lam ngokunyamezela, ndiya kukugcina uze ugcine, ndikusindise kwilixa lokulingwa, eliza kuza phezu kwelimiweyo liphela aze abantu bayo ukuba uvavanyo .
Igama lesiGrike lokulondolozwa igama lesiGrike (ukuya stereo). Isenzi isetyenziswa kabini kule vesi. Ixesha lokuqala iya kuguqulelwa kugcinwe , kodwa okwesibini ukuze ndikusindise evela kwi translation Swedish. Kwi-Funda i zombini eliguqulelwe ngokuthi balondoloze ngokunika betydning eyahlukileyo ngokupheleleyo:
10 Ngokuba waligcina ilizwi lomonde wam, nam ndiya kukugcina, ndikusindise kwilixa lokulingwa, eliza kuza phezu kwelimiweyo liphela, ukulinga abo bemiyo phezu komhlaba. (King James Version)
Thayer uthi xa eli lizwi esetyenziswa yi igama lesiGrike "omnye", oko kuthetha ukuba 'ukuma beqinile into enye, "kodwa xa isetyenziswa ne" oki "oko kuthetha nje i-King James zenguqulelo" kuphila ". Ngokufanayo, le "oki" lisetyenziswa xa sele iguqulelwe-1 Tesalonika 1:10 - .. ngubani Wasihlangula kuyo ingqumbo ezayo. UYohane wayefuna ukubonisa ukuba "kwilixa lokulingwa," yena wathi: "lehenyukazi iti". Kunokuba opt ukuba uYohane ukuba abhale "ek mavi horas" oko kuthetha, " ukususela kwilixa lokulingwa"
Kokukabani na Bembandezelo?
ISityhilelo 3:10 - kwilixa lokulingwa, eliza kuza phezu kwelimiweyo liphela aze abantu bayo ukuba uvavanyo .
IBandla lokwenyaniso ubunjwe bangabasemzini, balundwendwe emhlabeni. (1 Pet 2:11), kwaye efuna Osenyangweni (Kol 3: 1-2) ukuba ubuzwe yabo kwesibhakabhaka (Efe 2:19), yaye ikhaya labo esibhakabhakeni (Yohane 14: 2) .
Tit 2:13 - Ngoxa silinde ithemba elinoyolo boThixo omkhulu, wethu Fräsare uYesu Kristu Wabonakala ebuqaqawulini.
D t Akukho mathandabuzo ukuba ithemba lethu novuyo lwethu 'uYesu uyeza. Akufuneki silinde ukuba umchasi-, imbandezelo kunye ingqumbo kaThixo. Ukuba iNkosi wayecinga ukuba kokutyhutyha imbandezelo kunye nendlu Kristu ngabantu bakhe, yena walumkisa balungisa ibandla lakhe kuyo. Ngenxa kulo mzekelo, umchasi-ukuba beze ngaphambili phambi kokuba ayobe ingenzeka.
Iindaba ezilungileyo zobukumkani
D et Okanye ivangeli ubabalo ziya kuvakaliswa kulo imbandezelo, kodwa iindaba ezilungileyo zobukumkani. Ezi ndaba zilungileyo yi amaJuda abakhethiweyo 144,000 ndivakalise uMesiya ngokubuyiselwa umbuso kaMesiya. Iindaba ezilungileyo zobabalo njengoko sisazi ukuba siya kugqitywa ngaloo yobudala ecaweni kuphelile.
Ukholo Kwakhona cela uThixo, ukuziphindezelela ezintshabeni zawo. Oku kwakhona bungqina ikholwa ngayo kwiseshoni kwiNdibano. Thina awuziceli kuThixo ukuziphindezelela ezintshabeni zethu, sicela kuThixo ukusindisa bonke abantu. (Roma 12:19) Le amangqina amabini kwakhona ukufumana amandla, ukuziphindezelela phezu nokohlwaya iintshaba zawo.
F örsamlingens ayobe kwaba yimfihlo ecaleni uPawulos bayifumana kudluliselwa kwiNdibano. Ngoko ke, abazange bandiphulaphule uJesu usifundisa ntoni ayobe. UYesu ashumayele eluvukweni, ngomhla wokugqibela, kwaye ebonakalayo ayo kumaSirayeli.
Dan 9 ibonisa ngokucacileyo ukuba kwiveki 70 leminyaka ukuze uSirayeli neYerusalem, hayi ibandla.
Xa inkqubo adideke kaThixo kaSirayeli neBandla kuyoba okungalungile. Ngokusebenzisa izibhalo ezininzi, uYehova uthembisa ukuba icawa ayikho ubushushu lokukala, kodwa kusindiswa kuyo. Ingqumbo okanye umhla weNkosi kwisithuba seminyaka esixhenxe wonke. INdibano yeZizwe eziManyeneyo iya ngoko elixwiliweyo phambi kokuqala kwiveki yokugqibela leminyaka. Kanye njengokuba ibandla Filadelfia bayakugcinwa ndikusindise kwilixa lokulingwa.
Emva Isahluko 3 kwiNcwadi yeSityhilelo, sifumana singabi ibandla izahluko 6-19 apho kwakhona imbandezelo iminyaka esixhenxe. Sijonge okanye uMoya oyiNgcwele, nto leyo ngokusondeleyo ukuya ecaweni. Xa uMoya oyiNgcwele ohleliyo kwi basindiswe eyayingasekho emhlabeni, ukuba isimahla ukuba umchasi-nendlu yakhe. Icawa kuphela ukuba ibuyiswa isifebe.
Akukho bungqina bokuba iNdibano kufuneka kwimbandezelo, kodwa kunoko, kufuneka zigcinwe kuyo. Siya Shell elinde ukuba uYesu Kristu namhlanje bahlala ezintliziyweni zethu. Imbandezelo okanye lembandezelo kuYakobi kukuba abo bahlala emhlabeni. AmaSirayeli ke amaYuda aya wazama ngendlela ekhethekileyo ukuba ufuna ukubona uYesu njengoMesiya okanye hayi. Umchasi ngexesha lakhe umnquba lo kaThixo ophinda lokishi. Kukuliphi imelwe esibhakabhakeni nokuba ekuqaleni kwembandezelo yi abadala abangama-24. Xa iNkosi ubuyela emhlabeni kwisiTyhilelo 20 njengoko kwiNdibano, kunye neengelosi.
D lo et ukuba siqhubeke isithuba yokuqala 'ukubuya kukaYesu ngaphambi kwembandezelo, "nayo i ukuzilandulela ye Pre-tribläran leyo ethetha ukuba ayobe amakholwa kwenzeka ngaphambi kwembandezelo. Sifumana ezininzi kakhulu ilungelo izisombululo kwi OT ukuba Akayomizekelo indima ayobe, imbandezelo kunye maxesha siphila kuwo ndifuna ukubonisa ezinye ilungelo izisombululo ukusuka GT ungajonga kwaye uqinisekise i ayobe ngaphambi kwembandezelo..
N uthetha ngokubandezeleka kufuneka iqale yokwahlula phakathi ukubandezeleka jikelele sidibana ehlabathini (gr.thlipsis) kunye ukubandezeleka nazo kwimbandezelo enkulu (gr.Thlipsis Megas) ukuba uYesu uthetha kuMateyu 24, noDaniyeli kwiSahluko 12. kweli hlabathi amakholwa bokwenyaniso baya kufumana idabi lokomoya nazo izilawuli, nawo amagunya, nenyama yabo, yaye ngenxa yeendaba ezilungileyo. Loo uhlobo ukubandezeleka, uYesu akazange wathembisa ukuba siya kukhululeka. Lo msindo sithola kwimbandezelo yinto eyahlukileyo kunye into ilizwi uthembise ukuba akuyomfuneko nayo okanye uye kulo.
Kumaxesha akutshanje sele uqalile umsindo kaThixo ukuba abantu betydningar ezahlukeneyo. Iphawula ingqumbo yeMvana, Ingqumbo yomntu, ukuba uSathana unomsindo neyengqumbo kaThixo yaye liyazixakekisa oko. Kukho kwakhona ukungavumelani kwi ingqumbo kaThixo kwenzeka zombini nini kwaye njani.
E KwiSityhilelo, siyabona ukuba imbandezelo iqala kwiSahluko 6 lamatywina zokuqala ezintandathu yaphulwe yi iMvana kwaye igcina bakaThixo ezineengqayi ezisixhenxe yengqumbo kwisahluko 16-18. Kakade phakathi amatywina ezintandathu zokuqala, sibona Ifuthe elibi eziphilayo emhlabeni. Zamanzi ezintandathu zokuqala ukuzisa imfazwe, indlala, nakuzo izibetho, ezibangela ukufa ukuba ikota yabantu behlabathi. Ngamanye amazwi, malunga 1.7 billion abantu baya kufa ngexesha amatywina ezintandathu zokuqala. Ecaleni oku kuya kuba ukholo abantu abaye baba ngamakholwa ngexesha lembandezelo.
Xa iingelosi uthule izigodlo ezisixhenxe kunjalo ichukumisa oluzenzekelayo kwinkolelo ezintsha zolwaphulo zomhlaba. Ezi abagwebi ngokudibanisa iintlekele ezinamandla zendalo ngezibetho kwemvelo. Xa ulungele kunye yeentlungu zabo izigodlo ezisixhenxe ukuze babe yesithathu yamanzi kutshatyalaliswa, isahlulo sesithathu zonke izinto eziphila elwandle wafa, nesahlulo sesithathu lo mhlaba uza kutshiswa phezulu, nesahlulo sesithathu abantu asinda ezintandathu zokuqala zamanzi ziya kufa. Ngamanye amazwi, imali eyongezelelweyo malunga 1.7 sezigidi zabantu yabantu ehlabathini.
neendebe Umsindo ugqibe ekupheleni kaThixo yomgwebo
V ine akukho intetho kubantu abaninzi njani baya kuvunyelwa ukuba ubomi umsindo izitya kodwa ndicinga kuphela. UYesu ngokwakhe uthi ngaphandle kokuba ixesha asisifutshane, akukho umntu ukuze basindiswe (Mateyu 24:22). Ezi ukuvutha komsindo kuzo zonke decription, yaye kunzima ukuqonda imiphumo okanye betydningen kubo.
Ezi ezineengqayi yengqumbo iba ukugqitywa ekupheleni kaThixo umgwebo. Rev 16: 16-21 ithetha komhlaba ngokubanzi ukuba akuzange na into enjalo ngaphambili. Iziphumo iya kwenjenjalo zonke iziqithi ebalekayo, kwaye uya kuba iintaba sabakho. Kholwani kwendikuthethayo xa ndithi ukuba akukho mntu ufuna emhlabeni ngelo xesha.
Imbandezelo phantsi ingqumbo ezayo
M n Ngamanye amazwi, oku ixesha bembandezelo xa ingqumbo kaThixo kubonakala kwaye luthululelwe phezu kwawo wonke umhlaba. Le ingqumbo ayikho imini lula, kanye njengoko imini yeNkosi akukho nto mhlawumbi. ingqumbo kaThixo, ingqumbo, ngemini yeNkosi, engenangqumbo, njalo njalo. ixesha eqala ngophawu sokuqala eyaphukileyo uphelela kuYesu ebonakalayo ukuza uSirayeli kunye nehlabathi, apho ingqumbo kaThixo niya kubonakalaliswa.
UPawulos wakwenza kwacaca ukuba iNdibano kuba emhlabeni ngeli xesha yokugweba ophela ukuba sizi. Ngowe-1 Tesalonika 1:10 UPawulos uthetha ukuze uYehova uya kusisindisa kuyo ingqumbo ezayo. Ilizwi evela kwisicatshulwa esisiseko kuthetha ngokuthi kuthathelwe ingqalelo zombini ixesha nendawo, ukuze ngamanye amazwi, ayiyi kubakho xa sekwenzekile. Kuba uThixo akazange amisele ukuba ukubandezeleka ingqumbo kodwa ukufumana usindiso ngayo iNkosi yethu uYesu Kristu.
ingqumbo kaThixo ihlala imbandezelo yonke
N ke malunga ingqumbo kaThixo ngokufuthi abonisa abantu ukuba ayikho enye njengoko imbandezelo enkulu, yaye banyanisile ngokupheleleyo. Imbandezelo enkulu yiminyaka 3.5 ukuqalela ezinezothe eziphanzisayo kunye ingqumbo kaThixo okanye ingqumbo ihlala kulo kwembandezelo iminyaka esixhenxe.
Up 6: 16-17 - "Siweleni zizisithelisayo ebusweni bakhe ohleli etroneni, nakuyo ingqumbo iMvana kaThixo wethu. Kuba ingqumbo yakhe imini enkulu sele ufikile, yaye ngubani na onokuma?
Rev 15: 1 - Ndabona ezulwini omnye umqondiso omkhulu, ongummangaliso emazulwini: zinezibetho ezisixhenxe, ndingowokugqibela; ngokuba ngazo ingqumbo kaThixo ifikelela kuzaliseka.
Apha sibona ukuba, nangona uphawu lwesithandathu kangaka ingqumbo iMvana kaThixo ufikile, yona iyafana ingqumbo kaThixo, xa iMvana noBawo ngumntu omnye. Amaxesha amaninzi, njengoko lithiwe rhuthu ukuba zizibetho zosixhenxe zokugqibela - ngubani na ke ingqumbo kaThixo ingqumbo kaThixo. Kodwa isahluko 15: 1 sikwazi ukubona ukuba ingqumbo kaThixo kufikelela yayo kwesiphelo nezi izibetho yokugqibela, loo nto ekuqaleni kwayo. Ngoko ke nje kubekho nokuyifeza kwexesha kaThixo ingqumbo ophela nge zizibetho zosixhenxe zokugqibela.
Ezigciniweyo ixesha kunye nendawo
A iNkosi Braham ziyakhunjuzwa argument lwabo iSodom neGomora kwaye kuya kuba ngokunxamnye nemvelo yakhe ukutshabalalisa olilungisa kunye nongendawo (1 Eksodus 18:23).
UPetros usifundisa ngokusinika umzekelo uLote ukubonisa ukuba uLote akukho nenye yethutyana, kodwa umgaqo jikelele ukusuka kwicala kaThixo, ukuba iNkosi "igcina ekuhendweni abahlonela lokulingwa" translation IsiNgesi: I-iyakwazi iNkosi ukubahlangula ekuhendweni njani izilingo lobuthixo kodwa ". ILizwi Ukusuka (out) ithetha ixesha kunye nendawo yalo msitho.
F Ragan kukuba ingaba sinako ukufumana amazwi leyo ethetha uYehova intuthuzelo okanye nezilumkiso ukuba umtshakazi wakhe wajamelana ingqumbo ezayo? Ngaba sifumana amazwi Uthembisa ukukhusela kusilondoloza ngalo eli xesha embi imbandezelo na? Ngaba mhlawumbi ukubona ukuba iNdibano ebudeni bembandezelo?
Hayi, thina asikwazi! Nje ngenxa yokuba hänvänder kumaSirayeli xa ibandla iphelile, kwaye ukugcina inkqubo yayo noSirayeli ngeveki kwiminyaka yokugqibela, ngoxa uthembisa ukuba asimele si- abachatshazelwa ingqumbo ezayo.
Njengoko kwakunjalo ngemihla kaNowa
Mateyu 24:37 - Kuba, njengokuba ibinjalo imihla kaNowa, koba kwanjalo uNyana woMntu esiza.
H Erren ufuna ukufunda uNowa uthelekise kunye sicatshulwa lokuyeka. KuMateyu 24:37 sifunda ukuba ngendlela efanayo, njengoko kwakunjalo ngemihla kaNowa waphila kuya kuba nokubuya kweNkosi. Yintoni esinokuyifunda ngomhla kaNowa kukuba malunga ixesha ngaphambi koMkhukula, uNogumbe kunye isandla sikaYehova zokukhusela phezu uNowa nentsapho yakhe.
UYesu uqhubeka achaze ukuba abantu abaya kusinda kwimbandezelo ngoko nangoko uya kugwetywa phambi ubukumkani kunyaka 1000. Abanye baya elixwiliweyo ekugwetyweni yaye bavunyelwe ukuba bangene umbuso kaMesiya. Ngendlela efanayo konogumbe, abantu baya elixwiliweyo ematyaleni. Abantu bomhla kaNowa waphuma phantsi ngenxa yamanzi onogumbe, yaye ngendlela efanayo, abantu baya kutshabalala ngayo imbandezelo, kunye straks ngemva uYesu ukugweba.
iintlobo ezintathu zabantu
D et baba iintlobo ezintathu ezahlukeneyo abantu ababephila ngemihla kaNowa phambi wafika unogumbe. Yaba kwabangakholwayo abo ulicekisile ilizwi likaYehova, bonke batshabalala ngomkhukula. Yaba uNowa nentsapho yakhe basindiswa kuMkhukula, yaye ke uInoki lowo wathiwa xwi, wasiwa kuye iNkosi phambi wafika unogumbe. Ngamnye ngendlela zabo bamele abo bantu iindidi ezintathu ezahlukeneyo ukuba bakwazi ukuthelekisa ne ixesha lethu namhlanje. In nje ngendlela efanayo sibona iintlobo ezintathu zabantu ngemini xa ezihamba imbandezelo kunye nesiphelo ixesha:
· Abantu abo bafela unogumbe womhla kaNowa imele abangakholwayo, abo elingakhange lithathwe uYesu njengoMsindisi wabo. Abo bantu baya kungena imbandezelo, kwaye luboniswe ingqumbo kaThixo. Abo musa bakunyamekela oko ngentliziyo kwelo Bembandezelo baya kugwetywa nguYesu kwaye iya kuphoswa edikeni lomlilo lomlilo.
· UNowa imele amasalela akwaSirayeli, ukuba uYehova uya kugqiba izibhambathiso zazo zonyaka-1000 Empire. UNowa ndlela ahleliweyo akwaSirayeli, nto leyo ngendlela ethile ziya kukhuselwa ngethuba lembandezelo. 3.5 Iminyaka Bembandezelo uya amaYuda okholwayo ukuba asabe asinge entlango apho uYehova uya kubakhusela ukuba umchasi-nokutshutshiswa bakhe. UNowa sidlule kwezikhukula kwakhona kuya kuba yinxalenye yabantu yamaYuda ukuba.
· UEnoki ngumfanekiso yebandla ababengengabo inxalenye koMkhukula yaye Umgwebo kaThixo xa uyabanjwa aze asiwe nguThixo phambi wafika unogumbe.
UEnoki / Enoke uhlobo yeNdibano
1 Genesis 5:24 - UEnoki ngale ndlela wahamba noThixo, yena, ngokuba uThixo wamthabatha.
H Änok i wathetha kakhulu umfuziselo Yokuhlanganisela ayobe ithelekiswa ixesha lembandezelo anti-lamaKristu. UEnoki wahlala-7 kwinqanaba ukususela kuAdam, wahlala ixesha ekhethekileyo, oko kukuthi kwixesha ebingaphambi konogumbe. ILizwi lithi ukuba ngelo xesha ke ububi babantu bandile ehlabathini, kunye iintliziyo kunye neenjongo zabantu ububi ngokupheleleyo imihla yonke.
Phakathi kwale nxada abanesono, kwakukho indoda, uEnoki, ababekholelwa kuThixo yaye bahamba naye. (1MOS 5:24) Ubungqina uEnoki kukuba wafumana ngobabalo lukaThixo. (Heb 11: 5)
Enoke wabanjwa phezulu
Hebhere 11: 5 - Ngokholo uEnoki wafuduselwa emazulwini ngaphandle ejongene nokufa . Kwaye ke wamfumana alafunyanwa isela, uThixo ngenxa yokuba kuthatyathwa kuye ngokwakhe .
H Änok wabanjwa ngaphandle nokudla ukufa kuba uThixo wayethabathe kuye ngokwakhe. Ngexesha phambi ayobe bakhe njengokuba lalivakaliswa nguHanoki, abantu bexesha lakhe, malunga ntlungu ezayo kunye nesohlwayo sesono ukungahloneli Thixo. Xa injongo wesono yafikelelwa beza umgwebo kaThixo isono ngomhla kaNowa waza wathumela unogumbe, kodwa emva koko yena uEnoki sele xwi, wasiwa kuye uYehova.
Lo mkhukula ngumfanekiso ingqumbo kaThixo uya kuthumela phezu komhlaba, yaye abantu abangendawo kumaxesha ekupheleni - ingqumbo ezayo (1 Tesalonika 1:10)
Kuyiswe kwenye indawo
D igama lesiGrike et for "kuthatyathwa kuye ngokwakhe" na metatithemi, yaye e KVJ eliguqulelwe ngokuthi "transportet", oko kukuthi leyo, iyathuthwa kwenye indawo. UEnoki ngamanye amazwi, ithuthwa okanye wafudukela ezulwini kuba akazange eve kufa. 1 kwabaseKorinte 15 isixelela ukuba asinguye wonke umntu alale, kodwa bonke baya siguqulwe. Kuba uPawulos othi ayobe kwilokishi apho wonke umntu uya kujongana ukufa, kodwa amava ukuba iNkosi uthatha ukuba ekhayeni lakhe.
Kanye njengokuba uEnoki imele iNdibano ayobe ngaphambi kwembandezelo, emele uNowa nentsapho yakhe, nto wathembisa intsalela kaSirayeli, nto leyo iza kulondolozwa ukutyhubela imbandezelo, nokuba ukubona iintsikelelo umbuso kaMesiya.
I-bengabomlibo owesixhenxe ukususela kuAdam
D et ukuze umdla ukukhankanya apha kukuba Kambe ke uInoki, bengabomlibo owesixhenxe ukususela kuAdam. Assembly into efanayo ndlela kwiNdibano lesixhenxe ukuze iyavela IsiTyhilelo Isahluko sesithathu
Siphila kwixesha laseLawodike, leyo, ngokusekelwe kwimbali kunye amaxesha esiprofeto kuba elokishini nayo sicatshulwa yokugqibela yeNdibano phambi ayobe. Kwakhona Siphila ekuqaleni kweminyaka sjutusende emva kokudalwa, apho uEnoki wabanjwa phezulu njengoko wesixhenxe släktsled emva kokuba uAdam.
R OT ukusuka igama uEnoki kuthetha uqeqesho kunye nokufundisa, nto leyo eyenza ukuba sicinge mission umyalelo kaYesu 'ebandleni. - " Hambani ke ngoko niye kuzenza abafundi zonke iintlanga" (Mateyu 28:19 )
Ngokutsho kwizithethe yesiHebhere, njengoko uEnoki wazalwa ngomhla wePentekoste, nayo imini ibandla wazalwa. ubomi Hanoks kunye ayobe phambi unogumbe ingumzekelo ocacileyo ayobe ibandla.
ULote wasindiswa kusinda ingqumbo kaThixo
1 Eksodus 19:22 - "ukuba ndingawubhukuqi lo mzi uthethe ngawo. Kodwa Zikhawulezela zisindise ngokuya khona, kuba andinakwenza nto ude ube ulapho "
Luke 17: 28-29 - Ngendlela efanayo kwakunjalo nangemihla kaLote; babesidla, babesela, babethenga, babethengisa, babetyala, kodwa ngemini awaphuma ngayo uLote eSodom, kwana umlilo nesulfure ezulwini, batshatyalaliswa bonke bephela.
L guyz yasuswa ukusuka kwixesha nendawo apho umgwebo kaThixo wayeza kuba buhlungu. Iingelosi zaye zathunyelwa ukumhlangula uLote baxele ukuba ababanga nako ukuqala isigwebo sikaThixo kokuba uLote ukhuselekile. ULote ngumfanekiso yebandla othe sihlangulwe ixesha kunye nendawo ye ingqumbo ezayo.
2 Petros 2: 7-9 - Kodwa wasindisa uLote olilungisa, lowo bathuthunjiswe ubomi kunyeliswa ongendawo.
P etrus bafundisa ngomgwebo ochaphazela bonke ubugwenxa, yaye ibonisa ukuba uThixo akanaye amalungisa ityala kunye nabangendawo.
UDaniyeli amadoda amathathu ezikweni lomlilo
H istorien malunga uDaniyeli amadoda amathathu ezikweni lomlilo yenye yezinto amabali yeTestamente eNdala ebonisa umfanekiso ocacileyo imbandezelo kunye nokuzaliswa elizayo.
UKumkani uNebhukadenetsare, nto leyo Umzekelo ocacileyo Umchasi, awayebubeke up oqingqiweyo wegolide kwithafa laseDura eBhabhiloni. Qaphela ukuba lo mfanekiso ziikubhite ezimashumi eliphezulu ziikubhite ezintandathu ububanzi, leyo kunokufaniswa intetho Umchasi ngu 666. uNebhukadenetsare kwanyanzeleka wonke umntu, koko nikhahlele ninqule lo mfanekiso ranking, apho kwenzeka abo ndigqithe babeza kuphoswa ezikweni elivutha umlilo . Ezikweni elivutha ngumfanekiso ingqumbo kaThixo, olokuxina enkulu kwimbandezelo. (Malaki 4:. 1 - Yabonani, kuza imini, lona livutha njengeziko)
S adrak, noMeshaki, noAbhede-nego akazange kuqubuda oqingqiweyo likaNebhukadenetsare, yaye aphoswa ezikweni elivutha umlilo. Ukumkani wayalela ukuba iziko malibaswe ngokuphindwe kasixhenxe kunokuba endakha ndayibona ukuba, kwaye kukho umfanekiso intetho yogqibelelo. UYehova wathumela isithunywa sakhe owakhusela ooShedreki noMeshaki noAbhednigo kwelo ziko lomlilo, baphuma ngaphandle nawuphi na umonakalo okanye ifuthe emlilweni.
Kodwa icela umbuzo kweli bali kulapho uDaniyeli ethile. Ngaba omnye abo baguqa kwedolo ukuya nomfanekiso? Kutheni na ke ukuba kuyo, yaye kutheni na nayo kuphoswa ezikweni elivutha umlilo. Sinokuba ngokufanelekileyo ezithile ukuba uDaniyeli angagobanga kwedolo ukuya oqingqiweyo likaNebhukadenetsare. UDaniyeli nje khona apho wonke umntu uya kunqula umfanekiso oqingqiweyo, okanye kwelo ziko ovuthayo ukubandezeleka. UThixo waba "umthathile."
Inkcazo ukuba ukumkani la madoda ezikweni lomlilo kukuba kwakukho amadoda amathathu yamaYuda (Dan 3:12). Amadoda amathathu yamaYuda ngumfanekiso yabanyulwa akwaSirayeli eza kulondolozwa ukutyhubela imbandezelo, noDaniyeli, intanda (Daniyeli 10:11) ngumfanekiso bebandla baza kusinda kuyo imbandezelo.
UPawulos wafundisa ayobe
P aulus waba ngumntu wokuqala emhlabeni thaca imfundiso nokutyhilwa ayobe, malunga neminyaka engama-20 emva kokuba emnqamlezweni. Ngelo xesha ke ayaziwa kuba uYesu akazange afundise ukuba ayobe kubafundi bakhe ngexesha lakhe. Ayobe ibandla kakhulu esichazwe-1 Vatesalonika 4:16 no-1 kwabaseKorinte 15:52.
Enye iivesi zicacileyo ukusuka GT ukuba uyakwazi oko ibandla ivela Isaya 26: 19-21. Ndifuna ukuba ndizame ukuthelekisa oko sikubonayo kuIsaya isahluko 26, yaye kwimfundiso kaPawulos malunga ayobe 1 Vatesalonika 4: 16-17 & 5: 9.
Amazwi kaIsaya kunye umbhalo omnyama uPawulos ebomvu.
J es 26:19 - Ke abafileyo bakho baya kuphila; izidumbu zabo ziya kuvuka. (Okokuqala abafele kuKristu bavuke) Wake up and ukucula, nina bahlala eluthulini; kuba ngumbethe wezikhanyiso umbethe wakho kombethe ukukhanya, nehlabathi liya siphele nabafileyo. Yiza abantu bam, baye ezingontsini zenu, nivale iingcango emva kwenu. (Emva koko thina babudlayo ubomi, basaseleyo, sixwilelwe emafini kwakunye nabo, siye kuyikhawulela iNkosi esibhakabhakeni) nizimele umzuzwana, bada benyuka ubushushu egxothiweyo. Kuba, yabonani, uYehova uza kuphuma endaweni yakhe ukuba kubohlwaya abemi behlabathi ngenxa yobugwenxa babo. (Ngokuba uThixo akazange amisele ukuba ukubandezeleka ingqumbo kodwa ukufumana usindiso ngayo iNkosi yethu uYesu Kristu)
Kwakhona omelene ukubhekisela Yohane 14: 2-3 apho iintetho uYesu endlwini kaThixo noYise amagumbi ezininzi, kwanokuba ke, zisaya kunilungisela indawo. INdibano uya kuliva izwi elifanayo uYohane, eyive kwiSityhilelo: - "Nyukela apha," yaye siza kuthatha inxalenye ndawo uYehova uye walungisa ngathi. Kuya kufuneka ukuba aye ezingontsini zakhe, waluvala ucango emva kwethu. Xa Kwathi, uYehova ukusuka kwindawo yakhe ukuze kubohlwaya abemi behlabathi ngenxa yobugwenxa babo - ngubani na ke ingqumbo kaThixo.
Esi sithembiso ayikho malunga nokubuya kwakhe ebonakalayo apho uYehova woza uSirayeli ukuba abe apho bakhoyo. It is a isithembiso ibandla ukuba uye ekhaya uYise ukuba kunilungisela indawo apho.
Xa Ekuqaleni incwadi yeSityhilelo, isahluko 4, sidibana iqela ezingakhange wadibana thina phambi eBhayibhileni. ngaphambili Kuye kwaba nabanye abaprofeti abathathu kwe uYohane wathwala umbono ekubonileyo itrone kaThixo, kodwa akukho namnye ngaphambili wayixela le sihlwele. UIsaya wabona ukuba kuIsaya kwiSahluko 6. uHezekile abazibona kuHezekile Izahluko 1 &-10, yaye uDaniyeli wabona ukuba nayo kwiSahluko 7. yiyona abadala 24 Ndicinga yokuhlala zijikeleze itrone kaThixo e-ISityhilelo 4: 4
Esi sihlwele kuye ngoko lapho ngaphambili, kodwa ngoku, emva amabandla asixhenxe ukuba bamele ibandla ngokwembono zembali lesiprofeto, sibona ezulwini. Ba endaweni zijikeleze itrone kaThixo phambi Bembandezelo kuya kufuneka kwaqala kwiSityhilelo isahluko 6, yaye ngoko, mna ndiyakholwa ukuba abadala abangama-24 bamela ibandla elixwiliweyo leyo ndawo phambi kokuba Imbandezelo ufumana ekuqaleni kwalo.
Abadala 24 ehleli phezu kweetrone njengoko kulawula. Baya kuhlala emhlabeni kwetrone kaThixo, ngoko ke ukunceda nokuncedisa iNkosi. Bahlala phantsi ukuze umsebenzi wabo ugqityiwe. Bona bembethe okumhlophe njengoko rättfärdigjorda ke. iimpahla zazo Himation, yona iyafana kwiwadi kunye neempahla kaYesu. Banxiba izithsaba (linguStephanos) ngoko ke ookumkani. Zibizwa kwakhona Abadala libhekisela ezilungiselele ebandleni.
Xa sjungar ke sicule förlöstas ingoma ISityhilelo 5: 9-10:
" Ufanele ukuyithabatha incwadi, nokuwavula amatywina ayo; Ngokuba wahlatywa kuwe, uze uthenge abantu ngoThixo (thina) ngegazi lakho bevela kuzo zonke izizwe, neelwimi, nabantu, neentlanga. Ubenze (thina) ukuya ngaphakathi royal (ookumkani) kunye nababingeleli kuye uThixo wethu; kwaye (we) uya kulawula emhlabeni.
S ukuba amaxesha amaninzi kangaka, okubhaliweyo ayifakwanga kakuhle liguqulelwe kwisicatshulwa yokuqala. King James, phakathi kwezinye iinguqulelo wahlala umntu wokuqala yesininzi endaweni. Abadala 24 ukuchonga ngokwabo neCawa ngentlawulelo, nto leyo Unxibe njengabo, abefundisi kunye nookumkani njengabo, kwaye endaweni phambi kokuba iqale imbandezelo.
V kanjalo ukubona kuyo yonke iBhayibhile imizekelo emininzi kunye neemodeli indima ebonisa ukuba uYehova uya ukuhambisa ibandla zakhe zombini ixesha kunye nendawo xa kufikwa isigwebo ekupheleni-ixesha isuke umhlaba.
Uya kumncothula thina uwufihle nathi endlwini kaYise ecaleni ingqumbo yakhe egxothiweyo. Siyathembisa alondolozwe koko uya kudlula eli hlabathi ukususela injongo kunye nomxholo imbandezelo hayi ibandla. Thina silindele ukuba umchasi-kodwa ithemba elinoyolo boThixo omkhulu, uMsindisi wethu uYesu Kristu, Wabonakala ebuqaqawulini. (Tito 3: 4) Lowo usisindisele kuyo ingqumbo ezayo. (1 Tes 1:10)
D et Oku iposi sesithathu ndinibhalele nje ukuzilandulela imfundiso Pre-trib, eyile ukuba uYesu uza kuthabatha ibandla lakhe ngaphambi kokuya kwiveki 70 kanye lokugcina eminyaka, nokuba izigwebo usizi uyaphuma phezu emhlabeni.
U inxulumanisa umboniso yokubuya kukaYesu ebesoloko bhile, yaye ingcamango nisisizukulwana esinyuliweyo kwimbali yabantu abangayi kukha beve kufa, kodwa endaweni yoko kufuneka ukuzibonela ukuba siguqulwe kwenzeka xa uYesu eza ukuqoqa ibandla lakhe nge ukuba uncothule bephila ezulwini.
Imini yentlawulelo isondela
D et eyenza esinomdla isihloko kwaye impikiswano, kukuba iimpawu kuthetha ngamandla kakhulu ukuba liza kufika kule ukugqitywa elizayo, yaye ngaloo ndlela ke ukubuya kukaYesu.
Abantu abaninzi namhlanje bayonganyelwa ngemiqondiso siyakwazi ukubona kunye namava, yaye ukuba uMoya oyiNgcwele uthetha ngokucacileyo ukuba ibandla likaThixo kunye iintliziyo zabantu ukuze ulungele. Xa uxhulumaniso, ngoko abantu baqala ukubona ukuba imini asindiswe kuyeza, umbuzo olandelayo kukuba xa sinako ngokwenene silindele ukuba uppryckelsens mzuzu kwenzeka?
Imibuzo abaninzi bayabuza
E n Eminye imibuzo ukuba abantu abaninzi bayazibuza ngokunxulumene ukubuya kukaYesu kuxa sinokulindela ayobe livela? INdibano kuya kufuneka uye kwimbandezelo? Yintoni kanye kanye injongo imbandezelo, kwaye ngenene Umchasi okanye uYesu, sifanele silindele ukuba? Ukuba ukubuya kukaYesu kunye ayobe efanayo okanye iziganeko ezibini ezahlukeneyo?
Ndiyathemba ukuba eli sithuba nowokugqibela mna impendulo eminye imibuzo ebhaliweyo.
nokuqiniseka kwami ​​siqu
T reviously mna pretty waqiniseka ukuba kuqala uYesu uya ukubuyisa kumarhamente yakhe emva kwembandezelo kunye ayobe kanye nokubuya kukaYesu ebonakalayo isiganeko efanayo. UYesu uthetha kuphela lokubuya, yaye kutheni ibandla ukuba usindiswe usizi xa uSirayeli eli hlabathi ukuba ukubandezeleka? Ndabona imbandezelo njengenkqubo kuyimfuneko yokuhlambulula umzimba kaKristu ngenxa inkunkuma sibona kwiindawo ezininzi namhlanje.
Kodwa xa ekuqaleni eminye imibuzo engenampendulo ukuba andinako wabhideka noko ndikwazi ukufunda eBhayibhileni, ndiye ndazama ukuba mna kule imibuzo ngendlela eyiyo. Ezi iziphakamiso zibangelwa into eza nayo.
Kanye njengokuba kunqabisa ngoko mna namhlanje ekusindisweni kwam, nam xa kufika kwindawo ixesha ayobe ibandla. UYesu uza basuse ibandla lakhe ngaphambi kokuba kwiveki yokugqibela leminyaka kunye kwiveki yama-70, yaye ndifuna ukuba ukwabelana ezinye kwiimpikiswano endicinga ukuba uthetha kakhulu kuyo.
Ayobe kanye uYesu 'ukubuya ebonakalayo
Yohane 14: 1-3 - Intliziyo yenu mayingakhathazeki. Ukukholelwa kuThixo, nikholwe kum. Endlwini kaBawo amagumbi ezininzi. Ukuba bekungenjalo, bendiya Ndinixelele ukuba Ndiyemka, ndiya kunilungisela indawo kuwe? Ukuba ke ndimkile ndaya kunilungisela indawo, ndiya kuza kuniphuthuma, nize kum ngokwam, ukuze nibe lapho ndikhoyo mna
1 Tesalonika 4: 15-17 - siyakutsho kuni ngelizwi leNkosi ukuthi, thina babudlayo ubomi, esahleliyo ekufikeni kweNkosi akuyi kubaphangela abalele ukufa. Kuba xa umyalelo elikhulu, ilizwi lesiphatha-zithunywa, inexilongo likaThixo, iNkosi ngokwayo iya kuhla emazulwini. Kwaye kuphela abafele kuKristu bavuke. Emva koko thina babudlayo ubomi, basaseleyo, sixwilelwe emafini kwakunye nabo, siye kuyikhawulela iNkosi esibhakabhakeni. Kwaye ke soze siya kuba kunye neNkosi
U ppryckelsen alikho elinye igama ukubuya ebonakalayo kaYesu. Wena wayenokuthi ukubuya kukaYesu lwenzeka kwi zigaba baqala ayobe kunye isiphelo kusekubuyeni kwakhe ebonakalayo emveni kwembandezelo enkulu.
U ppryckelsen kuyinto umcimbi engabonakali lwenzeka ngaphandle isilumkiso. Siyazi, ngamanye amazwi ukuba kulungile xa kuthe kwehla, yaye siyaxelelwa ukuba silinde ngomthandazo. Siza kuyazi ixesha malunga ayobe kanye babe nokuqonda xa eqalisa nesivumelwano, kodwa ilixa mzuzu andazi nto malunga nathi, kwaye uya kufihlakala kude kube yimini yenzeka.
UYesu uza maphakathi Umhlaba kusikhawulela kwisithuba, uze emva koko uthabathe emva ezulwini, kuba ngathi ukuba sibe apho. Ukuba uYesu waqhubeka Earth emva ayobe, wenjenjalo usithabathileyo ukuba apho kunokuba thina. Kodwa kuYohane, yaye ubuyela ukuze sikwazi apho yena, ngubani na endlwini kaThixo ngoYise ebukumkanini bakhe basezulwini.
Jesus ukubuya ebonakalayo
J Esu ebonakalayo ubuyela kungekho engabonakali okanye imfihlo nize. Zonke amehlo aya kumbona, yaye uya kuba ibonakale ngokupheleleyo esemafini ezulu. Ixesha sosuku ubuye akumangalisi, ngoko, siyazi ke ngoko nangoko emva kokuphela kwembandezelo, okanye kwiminyaka nje 3.5 emva inkathazo enkulu ekuqaleni.
Abantu abambalwa abaya kusinda kwimbandezelo uya kukwazi ukuba zibone lo mcimbi.
Ngokutsho amazwi uYehova ngokwakhe
P aulus ugxininisa ukuba "ilizwi likaYehova " xa efundisa ayobe kanye novuko.
Okokuqala, kungenxa 1 kwabaseTesalonika yabhalwa nguPawulos malunga AD 51, yaye mhlawumbi nga zeVangeli kodwa xa uPawulos wabhala le ncwadi ibhalwe kwixesha kuyo. Okwesibini, uya nje akukho imfundiso uJesu zeVangeli apho uYesu uthetha abathile kwabafileyo ezivelayo, lo gama omunye eza uyaphila waguquka naye emafini.
UYesu washumayela kuphela nakukuvuka kwabafileyo, ngokusekelwe izithembiso zethu ukuze sibone kwi OT. Apho, uvuko engcwele wathembisa nangoko emva kwembandezelo enkulu (Daniyeli 12: 2), yaye nje phambi kokuba Millennium. Kuyinto le uvuko uYesu ebizwa ngokuba ubomi okanye uvuko leyo oko bobabo Saints GT.
1 Korinte 15: 51-52 - Yabonani, ndinixelela imfihlelo: zonke ubuthongo Asiyi, kodwa siya kwenziwa ngakumbi sonke, ngephanyazo, xa nakusekuqhwanyazeni kweliso, ngexilongo lokugqibela. Kuba liya kulila ixilongo bavuke abafileyo bengenakonakala, ibe siya kutshintshwa.
D et kuthetha ukuba uPawulos udlulisela enye zimfihlo ngokungathanga ngqo nebandla ukwenza, njengokuba ngokusebenzisa amagama ngqo okanye ekutyhilekeni kweNkosi.
Mfihlelo uPawulos udlulisa lo kwaye zange yatyhilwa okanye aziwayo, oko nje ukuba nisisizukulwana esinyuliweyo akayi kufa, kodwa uya kufumana liya kuguqulwa kwaye kumila kumbi, kwaye ziya kubanjiswa sidibane kwabafileyo ukuze ukuhlangabezana uJesu esibhakabhakeni.
Sifuna ukuba uphi yena
Yohane 14: 1-3 - "Intliziyo yenu mayingakhathazeki kholwani kuThixo, nikholwe kum Endlwini kaBawo amagumbi ezininzi Ukuba bekungenjalo, bendiya Ndinixelele ukuba Ndiyemka, ndiya kunilungisela indawo... kuwe? ukuba ke ndimkile ndaya kunilungisela indawo, ndiya kuza kuniphuthuma, nize kum ngokwam, ukuze nibe lapho ndikhoyo mna. yaye naphi na apho ndiya khona, uyazi ukuba. indlela omaziyo. "
Xa yeVangeli kaYohane, uYesu usinika isityhilelo ekhethekileyo. Yena uthetha into akukho mprofethi sase ngaphambili okanye yaba liyathembisa. Ayikho sinako sifunda ukuba uMesiya wayeza kuza, kodwa ukuba abuthele Saints in an iYerusalem basemhlabeni, ahambe nabo ukuya endlwini kaYise, nto leyo ndawo apho wayeza kumka.
Xa unikeza isithembiso, kuba phezu ngenxa yokuba " ndiza kuza kuniphuthuma, nize kum ngokwam, ukuze nibe lapho ndikhoyo mna." Lowo uthetha uzakubuyiswa, hayi kukhululeka bamaJuda ukuyenza, okanye ndibuzinzise ubukumkani bakhe emhlabeni, nokugweba iintlanga. Eli ligama ukwenza yakhe kuphela.
Yohane 14: 1-3 no 1 Th 4: 13-18
D apha kukho ukufana ezimangalisayo xa sithelekisa ezi ndinyana zimbini apho amanye amagama okanye amabinzana phantse twatse. Balandela ndawonye enye ngexesha elinye, ngendlela ababekwe kuza, nangendlela ukuba intwana lwakhiwe.
v.1 ochaphazelekayo v.13 Pine
Kholwani v.1 v.14 Yenza
v.1 uThixo, mna v.14 uYesu, uThixo
v.2 wathi ndithi kuni nina v.15
v.3 buya v.15 ekufikeni kweNkosi
v.3 thatha V.17 yakho wathwetyulelwa phezulu
v.3 me V.17 ukuhlangabezana iNkosi
v.3 nibe lapho ndikhoyo mna V.17 kuhlala neNkosi njalo-njalo.
Zombini ezi vesi kwaye sibonise nathi ngendlela eyodwa ukuba uYehova woza amakholwa ukusuka emhlabeni ukuya uzuko wezulu.
1. Ayikho iindinyana kwiTestamente Endala okanye iTestamente Entsha ukucebisa ukuba ibandla liya kungena esiyiminyaka usizi, okanye ukuba ibandla kufuneka ume ubuso ngobuso nxamnye Umchasi.
2. Usizi ubizwa ngokuba 'lembandezelo kuYakobi "(Jer30: 7), kodwa akaze abizwe ngokuba' ebandleni okanye ecaweni lokubandezeleka".
3. Angel uGabriyeli wamemezela kuDaniyeli ukuba kwiiveki 70 babezimisele phezu kwabantu bakho (amaYuda), nomzi yakho engcwele (yiYerusalem ke leyo). Ibandla engakhankanywanga apha. Dan 9:24
4. INdibano akabanga inxalenye kwiiveki zokuqala ezingama-69, yaye ayisayi kuba yinxalenye yokugqibela kunye kwiveki yama-70.
5. Ngo-ISityhilelo ayobe livela kwiSahluko 4: 1 ezo esiyiminyaka usizi ichazwa kwiSahluko 6-19. Abadala 24 omele ibandla endaweni ngaphambi uphawu lokuqala yaphukile.
6. INdibano ukhankanywa amaxesha amabini kwizahluko zokuqala ezithathu kwiSityhilelo, kodwa zange ekhankanywe phakathi isahluko 4 nese-19.
7. sexesha le mbandezelo enkulu ebizwa kwakhona i "ngemini yengqumbo" (Zef 1:15) eBhayibhileni, kodwa uYesu akazange amisele ukuba ukuhlupheka ingqumbo. (1 Th 5: 9), kodwa Wasihlangula "ingqumbo" (1 Th 1:10)
8. ixesha Usizi ebizwa ngokuba iMini yeNkosi eBhayibhileni (Zef 1:15). Kodwa 1 kwabaseTesalonika 5: 2-3 ithi ukuba imini yeNkosi (imbandezelo) iya kufika njengesela ebusuku. Xa abantu (abangakholwayo) uthi, "Luxolo nokunqaba," koko wabetha (abangakholwayo) ngentshabalalo yintshabalaliso ngebhaqo, iintlungu ucaca umfazi omithiyo, kwaye (abangakholwayo) akayi kusinda. Kucacile ukuba imbandezelo yinto eza kuhlelwa disbelievers, kodwa oko akubandakanyi elithembekileyo basindiswe.
9. Siya azithuthuzele omnye ngentetho ayobe (1 Tesalonika 4:18). Akukho intuthuzelo imfundiso ethi ukuba ibandla liya kungena inxalenye okanye yonke domstid yembandezelo.
10. UYesu wathembisa kwibandla Philadelphia ukuba wayefuna ukulondoloza ibandla, "ndinihlangule niphume kwilixa lokulingwa, eliza kuza phezu kwelimiweyo liphela aze abantu bayo ukuba uvavanyo." (ISityhi 3:10) UThixo wathembisa ukuba alondoloze ibandla othembekileyo ngaphandle esiyiminyaka usizi.
11. Kanye njengokuba uEnoki wabanjwa phezulu ezulwini ngaphambi kwezikhukula uNowa sidlule uMkhukula, iNdibano iza elixwiliweyo phambi kokuba imbandezelo uSirayeli ntsalela ugcinwe kwimbandezelo.
12. Ngendlela efanayo ukuba uThixo makangamgwebi iSodom neGomora phambi uLote kuwo umzi, uThixo akakwazi ukugweba zwe phambi amalungisa iphelile. (1 Gen. 19:16)
13. UYesu wathetha ngexesha lembandezelo xa wabuza: ". Vaka usoloko nithandaze ukuba amandla ukuzisaba zonke izinto ezizayo nokumiswa phambi koNyana woMntu" (Luka 21:36) Kwenza akukho mqondo ukuba uYesu ucela into akathanga akunanze ukugcina.
14. Malaki 3:18 itsho iNkosi (ekufikeni) kuya kubonisa ukuba umahluko phakathi kwelungisa nongendawo, phakathi komkhonzayo uThixo amkhonze. Pre-trib bakholelwa ukuba uYehova eza ukuqoqa ibandla lakhe, ngoko ke eza kunye naye ukuba ndigwebe phakathi lwamalungisa nabangengomalungisa.
15. Ngelo ayobe, uYesu uza kuba ibandla lakhe (1 Tesalonika 4: 16-17) xa efika ekupheleni kwembandezelo, yena eza kunye nebandla lakhe. (1 Th 3:13).
16. Xa oonobumba kuwo amabandla asixhenxe wamema uJesu ukuba 'makayive into ayithethayo uMoya kuwo amabandla. " Kodwa bembandezelo enkulu, emva koko uMoya oyiNgcwele yecawe icala wahlala, uthi: "Lowo uneendlebe zokuva makeve" (ISityhilelo 13: 9) U lishiye kwiNdibano, apho kungekho ibandla ukuphulaphula uMoya uthetha nabo ukuya nge kwimbandezelo.
17. Umchasi iya kungqubana engcwele kunye negunya kuzoyisa. (Rev 13: 7). Kodwa ngeke kube elokishini kuthethwa ngazo apha. UYesu ngokwakhe uye wathembisa ukuba 'helvets kumazibuko ayifanele ibe ibandla yamagorha. " (Mateyu 16:18)
18. UYesu akazange athi: "Xa oku kwenzeke," ngoko yimani nkqo, niphakamise iintloko zenu, kodwa kunoko, "Xa onke oku (iimpawu) iqalisa ukwenzeka," ngoko ke yimani nkqo, niphakamise iintloko zenu, ngenxa yokuba inkululeko yenu. (Luka 21:28).
S hill I ukhetha izibhalo ezimbini, GT no NT, bethetha kunye, kwaye singqine ukuba ibandla ngeke ngokusebenzisa ingqumbo kaThixo, okanye imbandezelo, ndifuna ukuveza vesi zimbini zilandelayo:
1 Tesalonika 1: 9-10 - The bethetha njani samkela kuni yaye kwenzeke njani kuThixo, niphuma kuzo izithixo, ukuze nikhonze uThixo ophilileyo oyinyaniso nilinde uNyana wakhe evela emazulwini, lowo uThixo wavuswa kwabafileyo, uYesu lowo osihlangulayo kuyo ingqumbo ezayo
UIsaya 26: 19-21 - Kodwa Abafileyo bakho baya kuphila; izidumbu zabo ziya kuvuka. Wake up and ukucula, nina bahlala eluthulini; kuba ngumbethe wezikhanyiso umbethe wakho kombethe ukukhanya, nehlabathi liya siphele nabafileyo. Yiza abantu bam, baye ezingontsini zenu, nivale iingcango emva kwenu. Fihla wena umzuzwana emfutshane bada benyuka ubushushu egxothiweyo. Kuba, yabonani, uYehova uphuma endaweni yakhe, ukuze kubohlwaya abemi behlabathi ngenxa yobugwenxa babo. Umhlaba uza ungabutyhili amatyala igazi labo kunye engasekho ukufihla ababuleweyo bawo.
V e akakwazi ukubona ukuba lo sicatshulwa evela Isaya ake ziye zazaliseka. Ayizi kwakhona akuvumelani yovuko wayebashumayeza iindaba ezilungileyo zikaYesu UDaniyeli uxelela Dan 12: 2, apho siyazi kuya kwenzeka emva kokuba imbandezelo hayi ngaphambili.
Apha uIsaya uthetha endaweni ukuvuselwa kwenzeka xa iNkosi yokuqala ngokuba abantu zabo emagumbini abo ngaphambi kokuba ingqumbo kaThixo nomgwebo uyaphuma phezu komhlaba.
Beza abantu bam
"K ngabantu bam," nto leyo ngokwenene lithetha "ukunyamalala" okanye "babe obungabonakaliyo", i ngokufana emangalisayo ukuba amava uYohane kwiSityhilelo isahluko 4, apho wabona umnyango uvulekile emazulwini, kwaye ngexesha elinye weva ilizwi likaThixo ixilongo ngokufanayo wathi: "Nyukelani apha." Ngoko nangoko emva kokuba uThixo, abandayo eba uJohane lifika kwitrone kaThixo, apho avela ezulwini bheka imbandezelo babedlala emhlabeni.
UYohane limele le ibandla eziya kufumana efanayo ngomhla uppryckelsens. Ngokusebenzisa umyalelo, ilizwi lesiphatha-zithunywa, inexilongo likaThixo, ibandla uya waxwilwa, wada wasiwa ezulwini, uya kubona imbandezelo zenzeka umhlaba.
Ukuzama ndiwavelele abemi behlabathi
ISityhilelo 3:10 - Ngokuba waligcina ilizwi lam ngokunyamezela, ndiya kukugcina uze ugcine, ndikusindise kwilixa lokulingwa, eliza kuza phezu kwelimiweyo liphela aze abantu bayo ukuba uvavanyo
J esaja uthetha "yeNkosi uphuma endaweni yakhe, ukuze kubohlwaya abemi behlabathi ngenxa yobugwenxa babo." Ngokufanayo uqinisekisa ISityhilelo 3:10 ukuba kwilixa lokulingwa (yembandezelo), eliza kuza phezu kwelimiweyo ihlabathi ukuba abantu balo ukuya uvavanyo.
Zombini iintetho uIsaya kunye iSityhilelo malunga injongo Imbandezelo lokohlwaya azame abemi behlabathi ngenxa yezono zabo ngokusebenzisa into ebizwa ngokuba ingqumbo kaThixo. Lo msindo efanayo ukuba zombini ezi ndinyana singqine ukuba bayasindiswa, yiNkosi isibizela ekhaya ukuya endlwini kaYise, ikhaya ezingontsini zakhe bada benyuka ubushushu egxothiweyo.
Umntu kwisiqithi yasentlango
O m sikwazi ukwenza umfuniselo wafaka indoda kwisiqithi entlango, kuphela iBhayibhile ngesandla sakhe, kodwa ukucacisa yanyanzeliswa imibono nezimfundiso. Sisiphi isigqibo ukuba eze kwisigqibo ngokubhekiselele kwixesha kwindawo sokuba ayobe?
Okokuqala, ufundile Isaya 13: 9-13, kunye Amosi 5:18 ukuba uThixo uya kuligweba ihlabathi ngenxa yezono zabo ngoku ekuchitheni umsindo wakhe ngokusebenzisa domstid eyoyikekayo njengoko iBhayibhile ichaza njengoko iMini yeNkosi.
UIsaya 13: 9-13 - Yabona, imini kaYehova iyeza, eyoyikekayo, iphuphuma umsindo, ishushu, ukuba ilenze senkangala ilizwe, ibatshabalalise aboni balo abahlala apho. Kuba iinkwenkwezi zezulu namakroza musa ithunyelwe ngaphezulu ukukhanya kwayo. Ilanga liphuma emnyama, yaye nokukhanya kwenyanga ayikho on. Ndiya kulohlwaya ihlabathi ngenxa yobubi balo, nabangendawo ngenxa yobugwenxa babo. Ndiya kwenza i stoltas ekuzenzeni ndinkqonkqoza phantsi oozwilakhe ikratshi. Ndiya kwenza amadoda anqabe ngaphezu kwegolide embiweyo, amadoda anqabe ngaphezu kwegolide ecikizekileyo yakwaOfire. Ngenxa yoko ndiya kuligungqisa izulu, nehlabathi, nekuthiwa bahlunguzele iziseko zawo -kambe uYehova wemikhosi ingqumbo, yomsindo wakhe ovuthayo.
Amosi 5:18 - Yeha abo banqwenela imini kaYehova! Kutheni uyakulangazelela yona? Imini kaNdikhoyo yoba sisithokothoko sobumnyama, ingabi kukukhanya.
G eNom ukuba uze ufunde kwi kuMateyu isahluko 24, wabona ukuba kwakuya kuba kubi kakhulu kangangokuba ngaphandle kokuba iNkosi waphetha bekuya kubakho ukusinda kwabantu ixesha yokugweba. Endaweni yoko uYehova uya nilwenze olu domstid ngamandla kwaye nobuqaqawuli kubuyela kulo mhlaba. Xa wayesazi ukubuya kukaYesu akazange akukenzeki, ngoko wayesazi ukuba ingqumbo kaThixo namanje ndawo kwixesha elizayo.
Xa wafika 1 Tes 9-10 ke ngoko akwazi ukubona ingxelo entle ecacileyo. Wayifunda ngoYesu usisindisayo yaye osihlangulayo kuyo ingqumbo ezayo.
1 Tesalonika 1: 9-10 - The bethetha njani samkela kuni yaye kwenzeke njani kuThixo, niphuma kuzo izithixo, ukuze nikhonze uThixo ophilileyo oyinyaniso nilinde uNyana wakhe evela emazulwini, lowo uThixo wavuswa kwabafileyo, uYesu uye osihlangulayo kuyo ingqumbo kuthi ezayo.
translation IsiNgesi (NIV): ..and nilinde uNyana wakhe evela emazulwini, awamvusayo kwabafileyo - uYesu, osihlangulayo kuyo ingqumbo ezayo.
G eNom ukufunda le vesi yeBhayibhile akwazi ukuphendula le mibuzo ilandelayo "ngubani, yintoni, phi, nini yaye kutheni." Ngubani (UYesu) Yintoni (osihlangulayo yaye usisindisele), xa (ixesha yomsindo). Xa ukufunda ngo-1 Vatesalonika 4: 15-17, wayekwazi ukufunda ukuba "bonke" into ukusuka emhlabeni ukuya kwamafu ezulu, yaye ngowe-1 kwabaseTesalonika 5: 9 wabuzwa kutheni okufanayo xa sifunda ukuba simiselwe ukuba ubunzima ingqumbo kaThixo, kodwa ukuzuza usindiso ngoYesu Krestu.
1 kwabaseTesalonika 5: 9 - kuba uThixo akazange amisele ukuba ukubandezeleka ingqumbo kodwa ukufumana usindiso ngayo iNkosi yethu uYesu Kristu
IsiNgesi translation (Funda): Kuba kaloku uThixo akasinyulelanga ingqumbo, usinyulele ukuba sizuze usindiso ngayo iNkosi yethu uYesu Kristu
V ur Umzekelo ubona ukuba, ukuba sosindiswa kwangohlobo ezisindiswa ngalo efanayo ixesha ingongoma ingqumbo kaThixo njengokuba thina abathile koko, unako ke ngoko ukucinga ukuba ayobe uya endaweni alimele. UXwilo uya alltstå zivuse ingqumbo kaThixo phezu komhlaba abayifumeneyo kwaqala kwiSityhilelo isahluko 6.
Iimpendulo kwimibuzo ebuzwa post-trib
M ed rhoqo kuya kusoloko iingxoxo kunye nemibuzo ezivela kubantu musani bakholelwa ayobe ngaphambi kwembandezelo. Nazi ezinye zazo:
"IBhayibhile ayifundisi ukuba kuya kubakho advents ezimbini. njani wena ukuba uYesu uza kuza kabini? "
Impendulo: esinjengaso nje ngendlela efanayo, kukho imifanekiso ezimbini ezahlukeneyo uMesiya kwiTestamente eNdala (inceku ukuhlupheka kunye uKumkani), kukho imifanekiso ezahlukeneyo ezimbini yokubuya kukaYesu kunzima ukufumana kunye. Ezi kulungisiweyo ezimbini ayobe kanye ukubuya ebonakalayo kaYesu. Wena uthi uYesu 'ukubuya yenziwa ngezigaba apho iqala ayobe, kunye noYesu' ukuzibulala ukubuya ebonakalayo. Kuyinto nje iindawo ezahlukeneyo ngokupheleleyo okanye iziganeko.
"UYesu wathi ayobe kuya kwenzeka ngokukhawuleza emva kwembandezelo (Mateyu 24: 29-31). Xa ethumela iingelosi ukuqokelela abantu bakhe"
Impendulo: I uXwilo awufumaneki kuMateyu isahluko 24 ngenxa yezizathu ezininzi:
At ayobe kufuneka imizimba amakholwa uzuko esenza kanye njengoko uYesu isantya Ascension angakwenza ngaphandle koncedo zezulu. Kutheni sifuna uncedo zezulu at ayobe, xa wajika ubuqaqawuli izidumbu?
Iingelosi siwabuthele ndawonye le orättfärdia ngeli xesha ngongoma (Mateyu 13: 38-43, 49-50)
Ukuba umntu uthi ukuba iingelosi oqokelela ngamakholwa kuMateyu 24 upprycklsen kufuneka Matt 13 ngokunjalo nayo apho. KuMateyu 13, sibona ngexesha elifanayo ukuba abangendawo uya kwaphulwa kude Umhlaba zokuqala kwaye amalungisa.
Iingelosi bathunyelwa ukuba abahlanganisele ndawonye kokubini, lwamalungisa nabangengomalungisa kugwetywa nguYesu phambi ubukumkani kunyaka 1000. Aba bantu emizimbeni yabo zendalo, apho abangendawo waphoswa edikeni lomlilo, ngelixa abalungileyo ezivunyelwe til ilifa ubukumkani kunyaka 1000.
Ukubuya kukaYesu esikuMateyu 24
Matthew 24:31 - Xa ufowuna sesigodlo esomeleleyo, uya kuthumela kuthuma izithunywa zakhe, zize zibuthe, abanyulwa bakhe, baphume iincam ezine, kwathabathela ekupheleni komnye ezulwini omnye.
M ku 24 zesahluko uchaza uYesu abonakalayo beze kumaSirayeli kunye nehlabathi. Kwisigwebo seentshaba zakhe, kwaye ukumisa umbuso kaMesiya. Amaxesha amaninzi isalatha ekhethiweyo Kwindinyana 31, apho uthi na ibandla. Ndicinga ukuba Kucacile ukuba icandelo amaJuda abakhethiweyo imalunga.
Zama ukuba uze wazise vesi zilandelayo ngokunxulumene kuMateyu 24:31:
Isaya 11:11 - Ke uNdikhoyo uya kuba ngelo xesha waphinda wafaka isandla sakhe, ukuze bafumane ngokwabo wamasalela abantu bakhe , yintoni usindile eAsiriya, eYiputa, nasePatros, Ethiopia, Elam, naseShinare, naseHamati, kwaye iziqithi .
UIsaya 11: 12 Yena uya kuzivelisela ibhanile iintlanga aze ahlanganise abagxothiweyo bakwaSirayeli, iintsali zakwaYuda emasondweni omane.
B Anner kunye ixilongo -sibonisa ubizo ebantwini. Akukho mathandabuzo ukuba likhoboka efanayo izinto abazithethayo, uThixo uthi nge uIsaya ukuba amadoda nabafazi ebizwa kaSirayeli. Abakhethiweyo amaYuda athembekileyo asinda Bembandezelo, nokuba ngelo xesha, saa kuwo wonke umhlaba. Zonke amaJuda uya ekhaya, nto leyo nayo ivumelana ngokupheleleyo kunye GTs amazwi esiprofeto. Kuyinto ubungqina bokuba akukho uthetha nebandla kwi sicatshulwa.
"Pre-trib sivela Abanye zabenza boyika ukuya nge intshutshiso"
Impendulo: Xa sithetha ngalo ukubandezeleka kufuneka iqale yokwahlula phakathi ukubandezeleka jikelele sidibana ehlabathini (gr.thlipsis) kunye ukubandezeleka nazo kwimbandezelo enkulu (gr.Thlipsis Megas) ukuba uYesu uthetha kuMateyu 24, kwaye Daniel Isahluko 12
imfundiso Pre-trib akuthethi kuphuma ngaloo amakholwa aya kusinda intshutshiso. UYesu waprofeta ukuba uya kuthiywa kweli hlabathi ngenxa yakhe (Yohane 15:18). Emisaveni amakholwa bokwenyaniso baya kufumana idabi lokomoya nazo izilawuli, nawo amagunya, nenyama yabo, yaye ngenxa yeendaba ezilungileyo. Loo uhlobo ukubandezeleka, uYesu akazange wathembisa ukuba siya kukhululeka. Lo msindo sithola kwimbandezelo yinto eyahlukileyo kunye into ilizwi uthembise ukuba akuyomfuneko nayo okanye uye kulo. (1 Th 5: 8)
"UPawulos uthi ngo-2 Tesalonika 2: 1-9 ukuthi ayobe zange kwenzeke phambi kokuba Umchasi ubonakala"
Impendulo: UPawulos uthetha ayobe ngokunxulumene imini yeNkosi, loo nto enstydig ukubuya ebonakalayo kaYesu. Usuku yeNkosi usuku olulodwa ngo betydningen iiyure ezingama-24, kodwa ixesha lomgwebo eliphuma ehlabathini. (Is 2:12, 13: 6, Hezekile 13: 5, Joel 1:15 UAmos 5: 18,20)
Ibandla eTesalonika babesoyika wakhathazeka ukuba kakade ngokwabo ngaphakathi ixesha lembandezelo. UPawulos kubenza kwaye ixelela Umchasi kufuneka kuqala kutyhilwa ngaphambi kokuba kwenzeke. Xa umchasi-uqalisa umnqophiso wakhe noSirayeli uqala kwiveki edlulileyo, okanye nembandezelo.
Njani abantu basindiswe kwimbandezelo nguMoya oyiNgcwele eyayingasekho emhlabeni?
Impendulo: Ukuba uMoya oyiNgcwele ukuba kwicala wahlala akuthethi ukuba azisekho ithuba losindiso, kodwa ukuba uMoya oyiNgcwele uya kuhlala ezintliziyweni zabantu apho nathi thina siphiwe uMoya oyiNgcwele njenge uphawu ihlukile kakhulu ukuba kuphelalwa kwamabadla.
Phambi kokuthululwa uMoya oyiNgcwele ngePentekoste Abantu wasindisa, kwaye uMoya oyiNgcwele wabonakala ebantwini. Xa uMoya oyiNgcwele sathululwa ngePentekoste, siye lwalungekho "yesibini" uMoya oyiNgcwele emhlabeni. Kanye njengokuba kwiTestamente eNdala, abantu baya kusindiswa ebudeni bembandezelo athe uMoya oyiNgcwele uya kusebenza ngendlela efanayo OT, isiseko phezulu.
Imibuzo imfundiso Post-trib
S amtidigt kukho kwakhona eminye imibuzo engenampendulo ukuba imfundiso Post-trib kunzima ukuphendula okanye ukunika inkcazelo eyiyo:
Ukuba ayobe eza kuqala at abonakalayo beze, abaya kuthi ke ngoko zizalise Millennium?
"Ukuba ucinga ukuba nje kusindiswa kufumana inxalenye kwiMillenium, kwaye ayobe eza kuqala at abonakalayo beze nto umgaqo bonke abantu zeMileniyamu ziye xa imizimba elingunaphakade kubo. Kodwa ke ngubani populate kwiMillenium, xa kwenziwe kunokwenziwa kuphela ngabantu imizimba natural "?
Impendulo: Oku kwenziwa ngabantu abo basindiswayo emva kokuba ayobe ngexesha lembandezelo. Amadoda aye Millennium emizimbeni yabo yemvelo.
Kutheni ayobe engakhankanywanga kwisiTyhilelo 19: 11-23 okanye Thing Isahluko 14?
"Ngo-ISityhilelo isahluko 19, sifumana inkcazo ukubuya ebonakalayo kaYesu, kodwa lutho uvuko okanye ukwehluka. UZekariya 14: 1-7 nayo sichaza esi siganeko, kodwa apho kukhankanywa. Ingaba na nqa ngako ukuba enye xiendlakalo lexikulu embalini ebandakanya uvuko amakhulu ezigidi zabantu engakhankanywanga kungabi kwiSityhilelo isahluko 19 okanye Thing Section 14? Kutheni? "
Impendulo: I uXwilo okanye uvuko akakhankanywa kuba nje into leyo engeyakwenziwa ngexesha kuyo.
Ngubani na oya kuqokelelwa kuqala, ukuba abangemalungisa (Mateyu 13: 30,41,49) okanye amalungisa? (1 Tes 4: 16-17)
Zombini 1 kwabaseTesalonika kunye UMateyu 13 ithi wabavusa ezichaphazelekayo uthathe indawo yokuqala. 1 KwabaseTesalonika isixelela uppståendelsen lebandla ulahlo kuqala, kodwa Matt 13 wabona ukuba kuqala abangemalungisa kususwa emhlabeni. Omabini la maqela Akungomntu wokuqala ukuba imini zisuswe?
Impendulo: Kukho iziganeko ezibini ezahlukeneyo ukuba nje azenzeki ngaxeshanye na .
Isibakala sokuba agciniwe uya kuvuzwa izithsaba at ayobe (enkundleni uKristu) Kwenzeka njani ukuba abadala abangama-24 sele kubo (ISityhilelo 4: 4-10) nokuba ayobe uthathe indawo?
Impendulo: I uXwilo kufuneka indawo athathwe ngaphambi uphawu lokuqala yaphulwe.
Kutheni iigusha neebhokhwe ziba wahlukanisa emva kwembandezelo yaloo sele ikho phakathi ayobe? (Mateyu 25: 31-33)
Impendulo: With ayobe zange kwenzeke ukubuya ebonakalayo kaYesu, ukuze wenze iigusha neebhokhwe (lokusinda abantu kwimbandezelo) kwahlulwa phambi Millennium.
yonke "olungagcinwanga" kulawo afumaneka phi ekupheleni Eliwaka? (Rev 20: 7-10)
Impendulo: Kukho abantu bazalwa ngexesha le-Millennium. Bayinzala abo angenileyo Millennium iiseli zabo zendalo.
Ngubani na ukuba ebambe ukuze ukuba umchasi-aninako ukufika phambili?
Impendulo: UMoya oyiNgcwele ibandla eli xihinga elikhulu umchasi-akakwazi ukuza phambili.
UYesu wathembisa ku Yohane 14: 1-3 ukuba wayeza kubalungiselela indawo amakholwa ezulwini, uze ubuyele ukuthatha apho yena. Pre-trib ubanga ukuba uYesu uza kubuyela emhlabeni ukuze ube khona kunye nebandla lakhe. Kwakutheni ukuze uYesu kubalungiselela indawo ezulwini uze uzinike thina apho?
Impendulo: imfundiso Post-trib kunzima kakhulu ukuchaza Yohane 14: 1-3
isibhengezo kukaYesu eNazarete
Luka 4:. 18-19 - "UMoya weNkosi uphezu kwam, Ethe ngenxa yoko yandithambisela ukushumayela iindaba ezilungileyo kumahlwempu Indithume ukuba ndiphilise abantliziyo ityumkileyo, ndivakalise inkululeko eemfama kubathinjwa nokubuyiselwa kokubona, ukuba anike idlwengulweyo, inkululeko kunye ndivakalise umnyaka owamkelekileyo weNkosi
E bamlandela uYesu walingwa entlango, weza eNazarete, apho wayefunda uIsaya 61: 1-2 waza wavakalisa ukuba la mazwi zizalisekile. Into ukuba ozakuliqaphela ukuba uYesu eyeka yee-isigwebo ngaphandle ngokugqiba yonke isiprofeto kaIsaya.
Isizathu UYesu eyeka embindini le vesi kukuba inxalenye yokuqala yale vesi liye Ukuza yakhe yokuqala ubulungiseleli bakhe basemhlabeni ukuyenza. Inxalenye yesibini yesi siprofeto ziza kugqitywa kuphela emva kokuba icawa eyayingasekho emhlabeni.
IZenzo 15: 13-18 - "Madoda, bazalwana, ndiphulaphuleni USimon lo wachaza ukuba wathini na ekuqaleni uThixo waqinisekisa waphumelela isizwana segama lakhe phakathi kweentlanga luhambisana amazwi abaprofeti, esithi: ke ndiya kubuya umva.. kwaye yakhiwe yokuhlala kaDavide uwe. amanxuwa awo ndibuye ndiwakhe, yaye ndiya ndiwumise;
D et ezinye izizathu zenkolo ibandla iya elixwiliweyo kwi iveki 70 kanye lokugcina leminyaka.
Ukuba isizathu olungundoqo kwiveki yama-70 ukuba zizalise izithembiso ezintandathu ukuya amaSirayeli ukuba sibona kuDaniyeli 9:24, ngoko ke ibandla zingasekho ngaphambi koko. UYakobi iyangqina ukuba kwiZenzo 15, ngokulandelelana emva kwexesha iNdibano emhlabeni, uYehova wayeya kumphazamisa siqhubeke inkqubo yayo kunye namaSirayeli. Ayobe iya kwenzeka ngexesha kwindawo eyahlukileyo kokubuya kukaYesu obubonakalayo iNkosi iinkqubo ezahlukeneyo amaSirayeli neBandla.
Usizi Ngamanye amagama, bobabini ekwabelwana. Okunye ukuba bazihlambulule uSirayeli, yaye okwesibini, utshabalalise, wenze neentlanga kongakholwayo. (Jer 30: 1-11). Ibandla ayifuni ne ezi njongo.
Le ixilongo 7
ISityhilelo 11:15 - ingelosi yesixhenxe yavuthela ixilongo layo . Emva koko lavakala esibhakabhakeni sicula owathi: ". Ubukumkani behlabathi ngoku bobabo iNkosi yethu kunye noMthanjiswa wayo uKrestu, yaye ke iya kulawula kude kube ngunaphakade kanaphakade"
E n Abanye bathi ayobe kanye novuko okwenzeka ngexilongo lokugqibela iyafana ne-7 kunye ngexilongo lokugqibela sidibana kwimbandezelo. Kodwa asimele ukubhidanisa ixilongo ezisixhenxe ISityhilelo 11:15, kunye ngexilongo lokugqibela besive Resurrection.
Okokuqala, kukho umahluko zombini kwisifundo kunye nefuthe kule amaxilongo amabini xa ixilongo likaThixo ixilongo wosindiso, ngokuchaseneyo amaxilongo asixhenxe sidibana kwiSityhilelo ukugwetywa kwalo eli hlabathi. Trump uThixo ubizo uvuko, wathi intlanganisela zabantu bakaThixo.
Asinto iNkosi uthule isigodlo kwiSityhilelo, kodwa ingelosi. Xa isithunywa ukuvuthela ixilongo, kukho umqondiso ukuba imbandezelo enkulu iqalise, kwaye kwiminyaka 3.5 lokugqibela lisenokuba uqalile. Ke ekugqibeleni, xa ixilongo kaThixo umsindo kangaka transmutes kuphela isiganeko esikhulu, ngoxa kukhupho ixilongo wesixhenxe iziganeko eziliqela ezahlukeneyo.
M Abantu umphunga benze yaye libhekisela imini yeNkosi, njengoko imini onqongopheleyo ezithile iiyure ezingama-24, nto leyo ethatha indawo ekupheleni kwembandezelo xa uYesu ukubuya ebonakalayo. Ngoko ke kuthetha ukuba imini yeNkosi noxhwilo kuyahambisana kwaye uyacima kwesinye.
Kodwa uphengululo ezinye bivelverser ekhankanya iMini yeNkosi ibonisa ukuba ayithethi nje kuphela ubheke ngamini-nye, kodwa ngexesha lomgwebo eyenzelwe Bembandezelo, uYesu ukubuya ebonakalayo kunye Millennium.
Yoweli 2: 11-20 - Usuku yeNkosi ziquka ukuhlasela okuvela utshaba entla, abaninzi bakholelwa kukuhlaselwa efanayo sibona kuHezekile 38-39. Abantu abaninzi bakholelwa ukuba uGogi / noMagogi impi kwenzeka inxalenye yokuqala yembandezelo.
Yoweli 3: 4 - Nantsi imini yeNkosi ebotshelelwe ukubuya kukaYesu ebonakalayo kunye umgwebo wakhe ezintlangeni.
2 Petros 3: 10-23 - Apha imini yeNkosi asinakubhekisa ukubuya ebonakalayo kaYesu, ngoko siyazi ukuba imini imizimba wasemazulwini ziya kubhangiswa, kwaye sifumana 'amazulu amatsha nomhlaba omtsha kwindawo yokuqala emva kweminyaka 1000 Empire.
ISityhilelo 20: 4 - Ndabona iitrone, baza bahlala kuzo banikwa igunya lokugweba. Ndayibona imiphefumlo yababenqunyulwe iintloko ngezembe, ngenxa bakuba beqononondisile uYesu kunye ilizwi likaThixo bengalinqulanga irhamncwa nomfanekiselo walo, hayi uphawu lwalo ebunzi okanye esandleni. Badla ubomi, baba ngookumkani kunye noKristu iminyaka eliwaka. Ke abafileyo abaseleyo ababuyanga badle bomi, yada yazaliseka iminyaka eliwaka. Oku ke uvuko lokuqala.
Duvuko lokuqala e-ISityhilelo 20: 4 ubuye into eye ingxoxo enkulu emva naphambili, kwaye ndiyacinga ukuba ilizwi iBhayibhile athethe kuba ngokwayo xa sifunda ngayo. Sikwazi ukubona le vesi ithetha lovuko, kwaye ke uvuko lokuqala. Ngoko siyabona ukuba, kwaye kukho uthethe ukholo ngovuko emva kwembandezelo. Kodwa oko kuthetha ukuba uvuko lokuqala kuphela ukholo kusuka imbandezelo? Awa, hayi.
D uvuko lokuqala ngakumbi malunga nokuba yintoni uhlobo uhlobo lovuko. Siyabona ukuba kukho iindidi ezimbini bavuswa. Eyokuqala ne ubomi obungunaphakade noThixo, kwaye uvuko yesibini phakade ngaphandle kuThixo. Uvuko iyiyimbi kukwahlukaniswa noThixo ngonaphakade, eyakhiwa zonke kuphazamisa ezifileyo onke amaxesha ngamaxesha, yaye kwenzeka emva kweminyaka 1000 Empire. (Rev 20: 5)
Uvuko lokuqala leyo ilingana ebomini obungunaphakade noThixo iqhutywa ngezigaba ezahlukeneyo. Kwi-NT, sibona wavusa abantu abambalwa ezahlukeneyo ukuba bonke bangenayo phantsi kudidi "uvuko lokuqala".
uvuko 1. UYesu 'ngomhla wesithathu. usindiso intlungu kaYesu kungenxa iqela lazo zonke isiyaluyalu. Ukuba akazange sixolelanisiwe nje sonke isono umkhosi phantse 2000 kwiminyaka eyadlulayo, ukuba asikhange sibe ukuvuswa kwabafileyo. uvuko lukaYesu ukuvuka kwam.
2. Ukuvuswa kwabanye abantu Testament GL tid.- Hebhere 11:35
3 Amakholwa Testament GL ezenzeka uxhulumaniso kokufa nokuvuka kukaYesu. Matt 27: 52-53
4th Assembly Christian ayobe phambi kokuba yokugqibela kunye ngeveki 70 eminyaka uSirayeli neYerusalem.
5. Uvuko amangqina amabini ekupheleni kwembandezelo - Phezulu 11:12
6. Ukuvuswa amakholwa Testament GL kunye lamangqina kwembandezelo, ebanjwa nje ngaphambi ukubuyiselwa ubukumkani bakwaSirayeli. - Dan 12:13, Yohane 11:24, Up 20: 4
M umphunga zeziganeko ezenzeka ngexesha lembandezelo nakunxibelelwano ukubuya kukaYesu abonisa ukuba kuyimfuneko ukuba kubekho umsantsa zexeshana phakathi ayobe weNdlu yoWiso-mthetho, uYesu ukubuya ebonakalayo. Ezinye zeziganeko zibonisa oku:
kwesihlalo sokugweba sikaKristu
2 Korinte 5:10 - Kuba thina aba sonke simelwe kukuthi sibonakalaliswe phambi kwesihlalo sokugweba sikaKristu, ukuze elowo azuziswe oko akwenzileyo kobu bomi, elungileyo okanye embi
G uds igama usifundisa ukuba sonke ngenye imini uya kuma phambi kwesihlalo sokugweba sikaKristu kwaye wenze räkenskab ngezenzo zethu. Inkundla oko kuba abasindisiweyo kwaye mazingabhidaniswa umgwebo kwi itrone enkulu emhlophe emva kweminyaka 1000 Empire. Igama lesiGrike le nkundla "Bema", yaye ke ngoko ngokuba "Beema umgwebo".
1 Korinte 4: 5 - Lower ngoko akukho umgwebo ngaphambi kwexesha, phambi kokuba ifike iNkosi. Imele ukukhanyisa njengoko ubumnyama uyazifihla futhi iingcamango notyekelo lwentliziyo yakhe, aze ke elowo nalowo abe nodumo lwakhe uThixo
Le Nkundla uthathela nangoko libotshelelwe ukuba upprycklsen, nto leyo ethetha ukuba xa iNdibano ubuyela kunye Krestu abuyele emhlabeni, sele zaba phambi kwesihlalo sokugweba sikaKristu, ukuba modtaga umvuzo wabo.
N Ågot njengoko bekräfter ukuba le nkundla kwenzeka akhawulezileyo itayi ukuya ayobe abadala-24, emele iNdibano ngamandla alo. Ba endaweni isangqa etroneni kaThixo, kroner entloko, yaye ukulungele ukukhonza uYehova ebudeni bembandezelo, phambi ngoko uYesu abaphula uphawu lokuqala kwiSityhilelo isahluko 6
Ukuba abadala abangama-24 omelele ibandla, oko kuthetha izinto ezimbini. Yaye ngexesha elifunekayo phakathi ayobe kanye ekuqaleni 70 årsveckans, naphambi sinqumo kuqala phambi kokuba ihashe yokuqala iya kukhululwa, ibandla sele indawo basezulwini.
Isigwebo beentlanga beeNtlanga
D ingumqondiso iintlanga akunakwenzeka ukuba bendingafuni ukuba umsantsa zexeshana phakathi ayobe kanye ukubuya ebonakalayo kaYesu. kokubili agciniwe njani enye kwaye olungagcinwanga, abasahleliyo nangoku emizimbeni yabo yemvelo ingahlulwa ukuba athembekileyo sele neengcambu waza wajika ubuqaqawuli izidumbu?
Ukuba ayobe kwenzeka emva kwembandezelo ukufumana nje akukho mfuneko ukwahlula abantu phambi Millennium. Sithanda kakade ziye uppdelining ngokunxulumene ayobe xa uYesu wamisela unyawo phezu kweNtaba yemiNquma.
Abemi le Millennium
M EOPLE kwabasindiswayo ebudeni bembandezelo uya kungena emizimbeni yabo yemvelo kwiMillenium. Aba bantu baya kusebenza, ukwakha izindlu baze babe nabantwana. Ngaphambi kokuba siye kungena kwiMillenium, kuya kubuya kubekho abantu abaninzi emhlabeni, ngokungafaniyo ekupheleni kwembandezelo, xa umntu uya kuba kunqabile kakhulu, ngaphezu kwegolide ecikizekileyo yakwaOfire? (Is 13: 9-12)
Xa i yobudala apho komJuda nowolunye uhlanga babe mzimba mnye kwakufuneka ixesha sikhala iNkosi kuqhubeka inkqubo kunye namaSirayeli. Kwiveki 70 kanye lokugcina leminyaka lixesha xa uYehova waphinda wafaka ujoliso lwayo amaYuda kunye nesizwe Israeli.
Isiphelo församlingenstid emhlabeni ugqibe nje iziprofeto zeBhayibhile kodwa ukubonakaliswa umsantsa eziyimfuneko phakathi ayobe kanye ukubuya ebonakalayo kaYesu. Zombini kwesihlalo sokugweba sikaKristu, abadala abangama-24, umgwebo kweentlanga, abemi kwewaka kunye nenkqubo iNkosi, ngenxa yamaSirayeli, yaye zibonisa oku.
V ukuphila ngexesha lokulinda. Okwangoku, yaye kulindeleke ukuba uYehova kungekudala uza kuba embiza thina ekhaya kuye. Mna kakhulu ngokuqinileyo inkolelo yam ukuba isizukulwana ekhethiweyo eziya kuba ubabalo ukuba, ixilongo abandayo wasezulwini kaNdikhoyo kunye uyakhala ingelosi.
Kuqalwa ibandla Ukuthululwa yayo zoMoya kaThixo NgePentekoste, yaye ziya kuqukunjelwa ayobe ibandla. Eli lixesha eliphezulu niziphakamise iintloko zethu, kuba kungekudala uza sikhululwe.
Ayikho iindinyana kwiTestamente Endala okanye iTestamente Entsha ukucebisa ukuba ibandla liya kungena esiyiminyaka usizi, okanye ukuba ibandla kufuneka ume ubuso ngobuso nxamnye Umchasi.
Usizi ubizwa ngokuba 'lembandezelo kuYakobi "(Jer30: 7), kodwa akaze abizwe ngokuba' ebandleni okanye ecaweni lokubandezeleka".
Ingelosi uGabriyeli wamemezela kuDaniyeli ukuba kwiiveki 70 babezimisele phezu kwabantu bakho (amaYuda), nomzi yakho engcwele (yiYerusalem ke leyo). Ibandla engakhankanywanga apha. Dan 9:24
Icawa Aninasabelo kwiiveki zokuqala ezingama-69, yaye ayisayi kuba yinxalenye yokugqibela kunye kwiveki yama-70.
ISityhilelo ayobe livela kwiSahluko 4: 1 ezo esiyiminyaka usizi ichazwa kwiSahluko 6-19. Abadala 24 omele ibandla endaweni ngaphambi uphawu lokuqala yaphukile.
Kukuliphi likhankanywe amaxesha amabini kwizahluko zokuqala ezithathu kwiSityhilelo, kodwa zange ekhankanywe phakathi isahluko 4 nese-19.
esiyiminyaka usizi ubizwa ngokuba 'ngemini yengqumbo "(Zef 1:15) eBhayibhileni, kodwa uYesu akazange amisele ukuba ukuhlupheka ingqumbo. (1 Th 5: 9), kodwa Wasihlangula "ingqumbo" (1 Th 1:10)
esiyiminyaka usizi ibizwa ngokuba iMini yeNkosi eBhayibhileni (Zef 1:15). Kodwa 1 kwabaseTesalonika 5: 2-3 ithi ukuba imini yeNkosi (imbandezelo) iya kufika njengesela ebusuku. Xa abantu (abangakholwayo) uthi, "Luxolo nokunqaba," koko wabetha (abangakholwayo) ngentshabalalo yintshabalaliso ngebhaqo, iintlungu ucaca umfazi omithiyo, kwaye (abangakholwayo) akayi kusinda. Kucacile ukuba imbandezelo yinto eza kuhlelwa disbelievers, kodwa oko akubandakanyi elithembekileyo basindiswe.
Siza kumthuthuzela omnye kunye intetho malunga ayobe (1 Tesalonika 4:18). Akukho intuthuzelo imfundiso ethi ukuba ibandla liya kungena inxalenye okanye yonke domstid yembandezelo.
UYesu wathembisa ibandla e Philadelphia ukuba wayefuna ukulondoloza ibandla, "ndinihlangule niphume kwilixa lokulingwa, eliza kuza phezu kwelimiweyo liphela aze abantu bayo ukuba uvavanyo." (ISityhi 3:10) UThixo wathembisa ukuba alondoloze ibandla othembekileyo ngaphandle kwexesha yembandezelo .
Kanye njengokuba Enoke wabanjwa phezulu ezulwini ngaphambi kwezikhukula uNowa sidlule uMkhukula, iNdibano iza elixwiliweyo phambi kokuba imbandezelo uSirayeli ntsalela ugcinwe kwimbandezelo.
Ngendlela efanayo, ukuba uThixo makangamgwebi iSodom neGomora phambi uLote kuwo umzi, uThixo akakwazi ukugweba zwe phambi amalungisa iphelile. (1 Gen. 19:16)
UYesu wathetha ngexesha lembandezelo xa wabuza: ". Vaka usoloko nithandaze ukuba amandla ukuzisaba zonke izinto ezizayo nokumiswa phambi koNyana woMntu" (Luka 21:36) Kwenza akukho mqondo ukuba uYesu ucela into akathanga akunanze ukugcina.
Malaki 3:18 itsho iNkosi (ekufikeni) kuya kubonisa ukuba umahluko phakathi kwelungisa nongendawo, phakathi komkhonzayo uThixo amkhonze. Pre-trib bakholelwa ukuba uYehova eza ukuqoqa ibandla lakhe, ngoko ke eza kunye naye ukuba ndigwebe phakathi lwamalungisa nabangengomalungisa.
At ayobe, uYesu ukuze ibandla lakhe (1 Tesalonika 4: 16-17) xa efika ekupheleni kwembandezelo, yena eza kunye nebandla lakhe. (1 Th 3:13).
Oonobumba kuwo amabandla asixhenxe wamema uJesu ukuba 'makayive into ayithethayo uMoya kuwo amabandla. " Kodwa bembandezelo enkulu, emva koko uMoya oyiNgcwele yecawe icala wahlala, uthi: "Lowo uneendlebe zokuva makeve" (ISityhilelo 13: 9) U lishiye kwiNdibano, apho kungekho ibandla ukuphulaphula uMoya uthetha nabo ukuya nge kwimbandezelo.
Umchasi liya kwenza imfazwe kunye nabangcwele, uze ube namagunya kuzoyisa. (Rev 13: 7). Kodwa ngeke kube elokishini kuthethwa ngazo apha. UYesu ngokwakhe uye wathembisa ukuba 'helvets kumazibuko ayifanele ibe ibandla yamagorha. " (Mateyu 16:18)
D uvuko lokuqala e-ISityhilelo 20: 4 ubuye into eye ingxoxo enkulu emva naphambili, kwaye ndiyacinga ukuba ilizwi iBhayibhile athethe kuba ngokwayo xa sifunda ngayo. Sikwazi ukubona le vesi ithetha lovuko, kwaye ke uvuko lokuqala. Ngoko siyabona ukuba, kwaye kukho uthethe ukholo ngovuko emva kwembandezelo. Kodwa oko kuthetha ukuba uvuko lokuqala kuphela ukholo kusuka imbandezelo? Awa, hayi.
uvuko lukaYesu ngomhla wesithathu. usindiso intlungu kaYesu kungenxa iqela lazo zonke isiyaluyalu. Ukuba akazange sixolelanisiwe nje sonke isono umkhosi phantse 2000 kwiminyaka eyadlulayo, ukuba asikhange sibe ukuvuswa kwabafileyo. uvuko lukaYesu ukuvuka kwam.
Ukuvuswa kwabanye abantu Testament GL tid.- Heb 11:35 Ezi amakholwa Testament GL ezenzeka uxhulumaniso kokufa nokuvuka kukaYesu. Mateyu 27: 52-53
INdibano Christian ayobe phambi kokuba yokugqibela kunye ngeveki 70 eminyaka uSirayeli neYerusalem.
Uvuko amangqina amabini ekupheleni kwembandezelo - Phezulu 11:12
Uvuko amakholwa Testament GL kunye lamangqina kwembandezelo, ebanjwa nje ngaphambi ukubuyiselwa ubukumkani bakwaSirayeli. - Dan 12:13, Yohane 11:24, Up 20: 4
D Le et yinxalenye ezine manqaku - ukubuya kukaYesu phambi imbandezelo, apho izithuba zilandelayo mna ngaphambili kwathiwa:
Imiba yakuziphendulela og
E ne yemiba basoloko kuxoxwa xa sithetha ngayo imfundiso Pre-trib - ukuba ayobe yokuhlangana phambi imbandezelo okanye kwiveki yokugqibela leminyaka - yimbali inxenye Pre-tribs ukususela edumileyo isiprofeto Margeret McDonald ukususela 1800 nokwadala John Xhosa e zenkolo.
Zombini iingongoma Ndicinga umdla kuba kaninzi sebenzisa njenge mpikiswano xa sithetha imfundiso Pre-trib, nto leyo ke kuvela imfundiso entsha, abangazange ngaphambili bafundiswe yi wembali yecawa. Esi sithuba ziyothatha ngokusekelwe ukungazamkeli kunye nemibuzo.
Eyona eqhelekileyo counter-argument
E ne lo argment ixhaphakileyo imfundiso Pre-trib ndlela "yiyo imfundiso entsha kakhulu ukuba ezithembakeleyo." Kodwa kukho ezininzi iingxaki nale ngxoxo. Eyokuqala kukuba ngoyaba isibakala sokuba iBhayibhile ifundisa ukuba ukuqondwa isiphelo iziprofeto ixesha aziboniswanga phaya okanye phendla, phambi kwexesha ukuba ezi ziganeko kwangaphambili zenzeke.
Xa uDaniyeli ebona iziprofeto ezithile kukuxelela ixesha lesiphelo, waphendula wathi kuNdikhoyo ukuba akazange aqonde kuzo. Nkosi Waphendula uDaniyeli ukuba 'la magama ukuze uhlale efihlakeleyo, atywinwe kude kube sekuphelisweni kwephakade eli. " (Dan 12: 9)
Ukuqonda igama lesiprofeto
N ke Ngamanye amazwi, sibona ke ilizwi leNkosi kufezwa ngokwemiqathango wesiprofeto sebhayibhile okhutheleyo, ngokunjalo nathi sitsho siyiqonde kakuhle igama lesiprofeto.
Ngoko ayimangalisi into yokuba imbali zebandla ziye imibuzo malunga isiprofeto kuHezekile 48, nto leyo ithetha kumthetheli-uGogi ngenye imini uya kuhlasela amaSirayeli kunye ingqokelela amazwe Muslim. Iminyaka amawaka aliqela, amaSirayeli akazange khona, yaye isiprofeto othetha ngayo kuhlaselwa ilizwe ukuba akekho ukudideka, uye wadala.
Ezinye iziprofeto uqhagamshele imbali yethu zombini kodwa uphuhliso lobuchwepheshe ukuba baye kwiinkulungwane kutshanje, into ekufuneka ukuba kungaziwa kubantu ababephila ngaphambili. Ebengayi kuthi na emnye ukuchaza amangqina amabini ka iSityhilelo isahluko 11, apho zombini ukufa kwabo nokuvuka, ukuba ubungqina yi elimiweyo lonke? Okanye umfanekiselo irhamncwa eza uyaphila kwaye uthetha amazwi abaqhankqalazi?
Siya ngamanye amazwi, ukuba sinolwazi oluchanekileyo igama lesiprofeto njengoko sisondela kwixesha lokugqitywa layo.
Spiritualising sesiprofeto seBhayibhile
D et yokuba iindawo ilizwi lesiprofeto ibe efihlakeleyo kwaye kunzima ukutolika de sibona igqibeke, into leyo eye zabonakala wembali yecawa.
Kulo nyaka-430 CE. Yabhalwa uyise ibandla Augustine ethi uthotho "Isixeko kaThixo", nto leyo sijongwa njengenye ezibaluleke kakhulu kwaye inflytelsesrika isebenza. Isiprofeto Augustine spiritualized seBhayibhile aphikisane ukuba iwaka leminyaka (Millennium) ukuba sele iqalile yaye iza kuqhubeka de 'uYesu yesibini ezayo.
Iziprofeto yebhayibhile wayeza, ngamanye amazwi lungenakuqondeka okanye njengoba zinjalo. Yaba lo spiritualization iziprofeto zeBhayibhile ezaziza ukuphawula ngembali yebandla kunye nendlela förtolkade them for iminyaka eliwaka ezayo.
Ooyise ibandla lokuqala
M enye phambi kokuba ndafumana 'yinto "wesiprofeto sebhayibhile apho kwakhona saqala ukubona nokutolika injalo, kunjalo kubonisa imbali nebandla ukongeza kubapostile, ngokunjalo nayo kwaBaseki okuqala kwiibloko zokwakha yemfundo yabo, nto leyo isisiseko imfundiso pre-trib . Kananjalo yokuba phantse zonke zezindlu zooyise zebandla yokuqala bashumayela premillennialism.
Justin Martyr (eyaziwa ngokuba Justin, Philosopher 110-165 e.Kr) leyo ebe luncedo kakhulu ukuqulunqa kwemfundiso iCawa kaThixo, wada waya kude ukuze wacebisa ukuba nabani washumayela nantoni na enye, waba njengomwexuki. (1)
A yinto wesiprofeto sebhayibhile okhutheleyo
E kwiminyaka emininzi yobumnyama yokomoya kumaXesha Aphakathi eYurophu sifika koHlaziyo, yaye ngokucotha saqala ukubona yinto wesiprofeto sebhayibhile apho förtolkningen sokwenene.
Oku "imvuselelo" baqala nzulu phakathi sithi, umbutho reformatory evelayo eNgilani ehlabathini 1560s, leyo ngokukhawuleza kwakhokelela ukuqonda ayobe yaba sisiganeko esahlukileyo uYesu abonakalayo beze.
Iinkokeli zabo "Yandisa Mather" apho ibandla zamaPuritan, Oman kunye isazi babenempembelelo enkulu kubomi yokomoya Massachusetts nokuxoxa ukuba ngcwele "babanjwa phezulu esibhakabhakeni ukuze basinde sicatshulwa yokugqibela lomlilo". (2)
A Uphuhliso zembali
F n ukuze ziphikise ukuba imfundiso Pre-trib i 'imfundiso entsha' yaye isekelwe kuphela ekufundiseni John Xhosa kaThixo, oku kulandelayo luphuhliso yembali kunye utplock ingxelo ngayo Abaseki beCawa kunye nabantu abaye babonisa iingcinga Pre-trib ekufundiseni kwakhe yi wembali yecawa.
Oku kuthetha ukuba xa abantu bathi ukubuya kukaYesu phambi imbandezelo, okanye ukuba imfundiso Pre-trib mfundiso esingamvakalisanga phambi 1800, oko nje akuyonyaniso. Ukuze ubonise ukuba le mfundiso khona kudala ngaphambi kokuba uYohane Xhosa, apha yimizekelo nje embalwa yabantu kunye ooyise zecawa akhupha le ngcinga:
I-First Epistle of uClement, 23, sabhalwa emhlabeni nyaka 96 AD - ukuba abe noKlemente Vafilipiya 4: 3 ibhekisela abe njengenkosana ibandla laseRoma. " Inene, kungekudala kwaye ngesiquphe na bakhe kufezeke , njengokuba isibhalo Kwakhona ungulo ungqinayo, esithi:" Seedily uya kuza, angalibali ", and" UNdikhoyo Iya kuza ke ngesiquphe etempileni yakhe, nokuba Lowo oNgcwele na khangela 'Ngubani.
Xa Second Epistle of uClement, sifunda oku: " Makhe iyure yonke Ungalindela ubukumkani bukaThixo ngothando nangobulungisa, Ngenxa yokuba ningayazi imini yeNkosi bavela ."
Irenaeus 130-202 AD - ubhala wakhe othi "Against Heresies 5:29 -" Kwaye apho ngaphambili, xa ekugqibeleni iBandla Kufuneka ngesiquphe waxwilwa koku, kuthiwa, "Kuya kubakho imbandezelo ekungazanga kubekho injalo kwasekuqalekeni, abayikuba buza" .
I Didache, 70-180 AD - Isahluko 16, Icandelo 1: Yiba qwa phezu ebomini bakho; ke izibane zakho na kucinywa, okanye esinqeni sakho ungired, kodwa ilungiswe, ngokuba akuyazi ilixa liya kufika iNkosi yethu. "
UTertullian 155-245 AD - Kodwa kuthekani njengomboniso Ingaba ukuqinise-esondela kokufika iNkosi yethu !, Ngoku ziphethwe bonke, ngoku kakhulu kuphakanyiswa ngoku Lowo lobungangamsha, "
UCyprian, 200-258 AD, wabhala oku kulandelayo "azibhala of uCyprian" apho uchaza amaxesha ekupheleni kunye kwembandezelo enkulu: "Ngaba na ukubulela uThixo, musa na Siyavuyisana wena, ukuba uya kuhluthwa kwanoko anako i yokumka phambi kwexesha , kwaye sihlangulwe yokwaphukelwa kunye intlekele ukuba kungekudala ? Makhe ndibulisa imini Yiyiphi unikela ngamnye kuthi kwikhaya lakhe, Yiyiphi akuhluthe thina hense, wammisa ukuba wandikhulula kwimigibe yehlabathi.
Umalusi Shepherd (kwatyatyamba 140 AD) yaba ngumbhali umKristu kucingelwa ukuba yenye yezona Fathers beCawa. Wabhala okulandelayo malunga kwembandezelo enkulu: " Ukuba ke ngoku zilungiseleleni, uguquke ngentliziyo yenu yonke nibuyele kuNdikhoyo, kuya kuba lula kuwe ukuba ukubaleka " (6)
Victorinus (eyaziwa kakuhle kunyaka 270 AD wafa 303 AD) wabhala namagqabaza awayebhalwe kwiNcwadi yeSityhilelo, waza wabhala oku kulandelayo malunga Phezulu 6:14 - "Ke ezulwini Drew njenge esongwayo isongwe. Kuba izulu limlilo ukuba liqengqiwe, Ukuze ibandla uya kuhluthwa kwanoko anako. "Yaye zonke iintaba kunye iziqithi isuswe fromtheir iindawo obusenyongweni xa betshutshiswa Last yonke kodwa wemka fromtheir iindawo; oko kukuthi, Ukuba kulungile luza kususwa, efuna ukuphepha Intshutshiso.
· UEphrem umSiriya (306-373 AD) - " Kuba bonke abangcwele kunye Elect bakaThixo Bahlanganisana, phambi kokuba Imbandezelo Oko kuza, kwaye la mayeza aselwa eNkosini hleze ukubona nokudideka Loo nto wagubungela World Ngenxa yezono zethu "(On the Times ophelileyo, i-Kristu, kwaye Isiphelo World, ka UEphrem umAram, 373 AD (7)
John Calvin - wenguquko ibandla ababehlala 1500. " Zilungiselele ukuba ulindele kuye imihla ngemihla, okanye mandithi ngamaphanyazo onke " "Njengokuba Yena uye wathembisa ukuba uya kubuyela Nto kuthi, Simelwe ukuba ukubambelela thina sikulungele, ngamaphanyazo onke, ukuba revieve kuye." "Namhlanje simele siphaphele ukuba baqonde ukubuya kukuba kaKristu. "
Martin Luther wathetha ngolu hlobo lulandelayo: " Ndikholelwa ukuba yonke loo mqondiso, Yiyiphi ukuba ezandulela kwimihla yokugqibela havealready wabonakala. Makhe sicinge ukuba Ukuza kukaKrestu kude ; Makhe sijonge phezulu kunye neeNtloko ezizinyusileyo; makhe ukuba uMkhululi wethu lokungena kukulangazelela nengqondo ochwayithileyo. "
Kwincwadi yakhe ethi, "Ukuqonda End Times Isiprofeto, wayedume uPawulos N. Benware, kwakukho abaninzi 1700s 1600 yaye wafundisa ukuba ayobe owahlukileyo ukubuya ebonakalayo kaYesu. (3)
Peter Jurie, wafundisa kwincwadi yakhe "Ukuya ukuhlangulwa webandla" ngo-1687 ukuba uKrestu uza kufika emoyeni ukukha bonke abangcwele nokubuyela ezulwini ngaphambi kweArmagedon. Wathetha a ayobe imfihlelo phambi kweNkosi nokungena uzuko namandla.
UFilipu Doddridge kunye nezimvo John Gill kaThixo NT (1738 no 1748) esebenzisa amagama ukuba ayobe kanye uYehova imminenta abuye.
Inkokeli Babtist Morgan Edwards, owazalelwa bakhonza eWales ngaphambi kokuya eUnited States ngo 1761. Ngo-1740 ukuba wanika Morgan yokubonakalisa iingcinga Pre-trib njengoko efundisa eschatology.
James Mcknight (1763) kunye Thomas Scott (1792) wafundisa ukuba ilungisa kuza kuthatyathelwa ezulwini, apho baya kuba bekhuselekile kude umgwebo kaThixo waba phezu (9)
John Xhosa - 1800-1882
J Thwin Xhosa wazalwa eLondon, waye lowo wayeza kuba nempembelelo enkulu imfundiso pre-trib, njengoko ngendlela ubeke enye emva kokuba wafunda isifundo.
Xhosa wagqiba kwelokuba kumele kubekho umahluko ocacileyo phakathi kwaSirayeli neBandla, waza waqiniseka ukubuya 'imminenta' kukaYesu, nto leyo ithetha ukuba uYehova unako ukubuya nangaliphi na ixesha, ngaphandle kwezinye abalinganiswa ekuqaleni. Ngowe-1827, wayenokholo eminye imigaqo esisiseko awayeza kubonisa inkqubo yenkolo entsha eyaziwa ngokuba "dispensationalism".
Isiprofeto Margeret MacDonald kaThixo
N Ågot kubalulekile ukuba bachukumise nokuba ibe siseko imbuzwano enkulu kunye miss ukuqonda, kanye isiprofeto Margeret MacDonald ukuba kuthathwa ukuba oko wenzé imfundiso Xhosa likaThixo nemfundiso. Le mbono lwenziwa sele 70s ngu Dave MacPherson kwi "I Ongakholelekiyo Pre-Trib Origin 1973 (5)
Dave MacPherson waba imbono zabonakala Kwempikiswano kukuba-siseko ukuba imfundiso Pre-trib bubuxoki.
Margeret, ngoko-15 eminyaka ubudala, ukuba athathe inxaxheba kwintlanganiso ngomthandazo iqhajana eSkotlani - ngo 1830. Apho, wayeza baprofeta kwaye anikwe isiprofeto apho yaxela ukuba ayobe kwakuza kwenzeka ngaphambi kwembandezelo.
J izihlanganisi AG oku siprofeto sisonke ukuze Wena ngokwakho bagwebe. Ngelishwa, okubhaliweyo aliguqulelwanga Swedish:
Nantsi i Ngaphandle isiprofeto endithe wabalaselisa okubhaliweyo umdla:
" Xa Saw Abantu of Good kwi meko siziphekuze esiyingozi, engqongwe iminatha kunye entanglements, malunga ukuze nilingwe: abaninzi iza tlhela kunye namatyala. Ngoku uya abangendawo kutyhilwa, ngawo onke amandla kunye nemiqondiso nemimangaliso yenkohliso, Ngoko ukuba bekunokwenzeka kakhulu abakhethiweyo iya belahlekiswa. - Le yeyona kwetyala lomlilo Yeyiphi kukuzama kuthi. - Kuya kuba ukudla kunye ekuhlambululeni amalungu ngokwenene umzimba kaYesu; kodwa Oh Kuya kuba kwetyala lomlilo. Wonke umphefumlo ziya kugungqiswa kanye embindini. Utshaba iza kuzama ngokushukumisa yonke thina sakholwayo - Kodwa ukuze ukucikideka kokholo lokwenene ziya kufumaneka ukuba negama, nidunyiswe nozuko. Nto, kodwa oko uThixo uya kuma. Abevayo ezilulwalwa-phantsi iya kwenziwa ibonakale - uthando lwabaninzi kubanda ukuthanda wax Kwakudla saidthat ebusuku, kwaye onokutshitshisa ukusukela, ngoku na emehlweni oboyikisayo ngoKristu lobuxoki kubonwe kulo mhlaba. kunye nto ke uKristu uphila kuthi ukubona le iinzame oboyikisayo utshaba akhohlise - okanye ke nangako ukulukuhla konke kokungalungisi uya kusebenza - ke willhave ukuphikiswa-party yonke inxalenye yenyaniso kaThixo kunye ukulingiswa wonke umsebenzi uMoya. UMoya Kufuneka kwaye buya kuphalazelwa phezu Church, ukuze abe nyulu, hluthani noThixo - kwaye nje kuyinciphise, njengoko uMoya kaThixo esebenza,
Oku Ingakumbi uhlobo kwetyala, ngalo Abo kugqitha Ngubani na oya kuthiwe nikufanele nokumiswa phambi koNyana woMntu. Kuya kubakho uvavanyo yangaphandle kakhulu, kodwa 'tis Ngokuyintloko isilingo. Oku olwalubangelwa kuthululwa uMoya, kwaye yande tye ngomlinganiselo uMoya eliphalalela. Ukuqotywa Church uvela Umchasi. Oko ngokuthi ezele nguMoya Ukuba Siya igcinwe. End quote.
Izichaso kunye yakuziphendulela
O m uyakwazi ukuqonda intsingiselo yesi siprofeto, uya kuqonda ukuba akukho yakuziphendulela kwacaca ngokuphathelele esi siprofeto evela Margeret, kanye ngale ndlela bekuya kuba nefuthe yezenkolo John Xhosa esithi:
Okokuqala, kukho umahluko okhoyo phakathi isiprofeto kunye neencwadi yokuqala John Xhosa kaThixo. Esi siprofeto kunyaka 1830, kodwa iminyaka sele eliqela ngaphambili, Xhosa wabhala iincwadi malunga ayobe ekuqaleni ngaphambi kwembandezelo. Kuyinto engenakwenzeka Xhosa ngewuthe umbala kule siprofeto.
Usizi zokuhlanjululwa umlilo
F indlebe Okwesibini, ukuba owona mongo isiprofeto eyenza kube nzima. Ukuba uyathanda, andikwazi ukufunda nokuqonda oko kubhaliweyo, ngoko akukho nto siprofeto kubonisa ukuba Margeret akazange wacinga okanye waprofeta iphupha pre-trib. Margeret "profeta" kuquka le ilandelayo:
"Eli tyala lomlilo Yeyiphi kukuzama kuthi. - Kuya kuba ukudla kunye ekuhlambululeni amalungu ngokwenene umzimba kaYesu; kodwa Oh Kuya kuba kwetyala lomlilo
Oku Ingakumbi uhlobo kwetyala, ngalo Abo kugqitha Ngubani na oya kuthiwe nikufanele nokumiswa phambi koNyana woMntu.
Ukuqotywa Church uvela Umchasi. Oko ngokuthi ezele nguMoya ukuba siya kugcinwa "
Xa Margeret ubhala loo mbandezelo, okanye lophando kukuba ukucoca ibandla, kwaye Assembly imbandezelo kuya kufuneka ukuba uhambe nge yayiza kuvela Kristu, ngoko ke akukho nto kodwa iingcinga ngokucacileyo post-trib ukuba babe nto ukubuya kukaYesu ngaphambi kwembandezelo ukukwenza.
Okwesithathu, isiprofeto ngokwenene efanelekileyo. Kubalulekile umba kukuba ingaba imfundiso nengcindezelo okanye hayi, kwaye oko kukuthi, ngamanye amazwi ilizwi likaThixo ukuba isigqibo.
Ayobe "kusondela" okanye ehlobene
1 Tesalonika 1:10 - nilinde uNyana wakhe evela emazulwini, athe uThixo wamvusa kwabafileyo, uYesu lowo osihlangulayo kuyo ingqumbo ezayo.
E ne yenxenye ibalulekileyo xa sithetha ayobe, kukuba "kumbovu," nto leyo ethetha na ezinxulumene, nento ubuya ulindele ntoni na ixesha.
Intsingiselo yegama elithi "kumbovu" na "umgangatho okanye imeko yokuba eza kwenzeka" - An isiganeko okanye imeko oluza kwenzeka. Ngoko ke, xa sithetha yeNkosi "imminenta" okanye imbuyekezo ezinxulumene ngokunxulumene yokuphela kwexesha ziprofeto, ngoko nje kuthetha ukuba ukubuya kukaYesu ibandla angabona nangaliphi na ixesha, ngaphandle abalinganiswa ekuqaleni.
Igama elithi "balinde" kule vesi yeBhayibhile Liguqulwe lithatyathwa kwigama "anamenein" elithetha "silinde umntu ukufika." Ibonisa sengqondo 'esebenzayo "kunye nendima zomntu ulindile.
Siyakuba - umcimbi ungatyikitywanga
D et kuphela kwendlela eya ayobe ebandleni 'igalelekile "kwaye linga tyikitywanga, kukuba kufuneka lwenzeke phambi kokuba imbandezelo okanye kwiveki yokugqibela leminyaka. Ngamanye amazwi, akukho zimpawu esiprofeto eziya kwandulela ayobe, okanye into iNdibano kufuneka ulumkele iza kwenzeka phambi kokuba ukuba esi siganeko kungathatha indawo.
Ukuba Icawa ulinde umqondiso, ngoko ngeke kube khona, okanye abe imfuneko 'kulinda rhoqo ukubuya kweNkosi. "
T wagula Ngokungafaniyo ayobe ukubuya ebonakalayo lukaYesu "kusondele", ngoko ke kufuneka kubekho ubungqina okanye iziganeko ngaphambi kokuba uYesu abeke iinyawo zabo phezu kweNtaba yemiNquma.
Okokuqala, kufanele Israyeli emva kwilizwe labo. Umchasi kufuneka bakunyathela phambili, kwaye kufuneka ukuba isikizi lesiphanziso, kunye nerhamncwa. Abaprofeti ababini Kufuneka kwakhona eze ngaphambili uprofete ngexesha iminyaka 3.5, nomgwebo kaThixo nomsindo kufuneka kuphalazelwa phezu kwale emhlabeni. Ekugqibeleni, zonke uhlanga umele uvule nxamnye noSirayeli, yaye siya kufumana njengokuba iBhayibhile ithi iArmagedon.
Ukungabikho ngamazwi axhasayo
D et ukuba kubalulekile xa sithetha Assembly ayobe, kukuba nguwe nje ukuba senze kukungabikho iyonke ekhoyo kwamagama axhasayo, ithemba lobomi obungunaphakade kwabo phikelela nokuphila kwabo ebudeni bembandezelo ukubandezeleka, okanye izithembiso amandla ngexesha sigqibo Umchasi kaThixo.
Ngaba indlela ibandla olwalumiselwe iphumele xesha imbandezelo, uNdikhoyo uza kulungisa ngokucacileyo ubavuselele ibandla lakhe ngale nto.
G uds gama ubiza kuthi gqolo ukuba ulindelo rhoqo yokubuya kukaYesu, nto leyo ke sisiganeko lokwenene ngaphandle oonobumba ekuqaleni. Nantsi imizekelo ezinye izicatshulwa ukuba zombini sokukhomba kwaye abonisa ukuba ibandla kufuneka bahlale elindele rhoqo lweNkosi yethu uYesu ukuza kubantu bakhe:
Roma 13: 11-12 - Lumkani konke oko, kube kokukhona, njengoko naziyo ukuba ixesha ukubandezeleka, ukuba lifikile ilixa lokuba sivuke ebuthongweni. Kuba ngoku usindiso lukufuphi zethu xa sifika ukukholwa. Ubusuku buhambile, imini ikufuphi. Ngoko ke asilahle imisebenzi yobumnyama, sixhobe iintonga zokukhanya.
1 Korinte 1: 7 - ukuze nina nasinye isipho, ngoxa nilinde iNkosi yethu uYesu Krestu, isityhilelo.
Ifayile 3:20 - Siya kuba singabemi isemazulwini, yaye ukusuka apho silinde, neNkosi yethu uYesu Kristu njengomsindisi.
Filipi 4: 5 - mazithi iingcelo zenu makwazeke ebantwini bonke. INkosi isemnyango!
1 ndandiswele 1:10 - kwaye nilinde uNyana wakhe evela emazulwini, awamvusayo kwabafileyo, kwauYesu, usisindisayo ukubaleka ingqumbo.
Tit 2:13 - ngoxa silinde ithemba elinoyolo, boThixo omkhulu, uMsindisi wethu uYesu Kristu, nembonakalo yobuqaqawuli.
Hebhere 9:28 - yaye uya kuthi okwesibini, liphuma, kungekhona ukuze isono kodwa kusindisa abo babemlindile.
Hebhere 10: 37 - Kuba kusaya kuba mzuzwana mncinanana elifutshane, lowo uzayo, kwaye akayi kulibazisa.
EkaYakobi 5: 7 - Linda ngomonde ngoko, bazalwana, ide ifike iNkosi.
Yakobi 5: 8 - Yiba nani ixesha elide nokomeleza iintliziyo zenu, ngokuba ukufika kweNkosi kusondele.
1 Petros 4: 7 - The ukuphela kwezinto zonke kusondele.
Yude 1:21 - zigcineni kuthando lukaThixo, ngoxa nilinde iNkosi yethu uYesu Krestu inceba yakhe, uya kunipha ubomi obungapheliyo.
Phezulu 3:11 - I kungekudala. Bamba into onako, ukuze kungabikho namnye usithabathayo isithsaba sakho.
ISityhilelo 22: 7 - "Yabona, ndiyeza kamsinya.
ISityhilelo 22:20 - Uthi lowo uzingqinayo ezi zinto uthi, "Ewe, ndiyeza kamsinya." Amen, yiza, Nkosi Yesu!
Ngoko le ezinye izicatshulwa eBhayibhileni ebonisa ukuba okulindelekileyo ukuba iNdibano kufuneka. Amagama ezithetha ukubuya kweNkosi ezinxulumene noku, iNdibano kufuneka njalo uzilungiselele. Bethetha malunga nokubuya kweNkosi ngaphandle nemiqondiso phambi, yaye zibonelela intuthuzelo kunye nenkuthazo ngaphandle ezinxulumene ukuba imbandezelo.
weza You iNkosi yethu - phantsi
1 Korinte 16:22 - Ukuba ubani akayithandi uYehova, uya makasingelwe phantsi. Marana tha.
E ne wempikiswano kakhulu ukuba icawa wahlala elindele rhoqo yokubuya kukaYesu yindlela bayabulisa omnye komnye yaye uPawulos usebenzisa kwenye yeencwadi zakhe: Marana'ta.
Igama Marana'ta yi isiAramiki kunye lithetha "Wena Nkosi yethu, yiza!" Yaba yimbonakaliso umnqweno iNdibano kunye nokuqonda ukuba iNkosi singafika naliphi na ixesha. Ngoko ke xa uPawulos ubhala ngesibingelelo wokuvala-1 kwabaseKorinte 16, uthi xa ubani akayithandi uYehova, uya kuba 'masisingelwe phantsi ". Eli gama lithetha ngumsindo, waza uqalekisiwe "Marana tha," ukuza yeNkosi.
Ukuba iNdibano akazange basenokulindela ukuba uYehova wayeza kuza, bakuba ayisetyenziswa mbuliso, nto leyo zombini ngomthandazo, isicelo kwaye isimemezelo zokufakwa ukubuya kukaYesu.
Ukuba uPawulos ubalindile iNkosi
1 Tesalonika 4:15 - siyakutsho kuni ngelizwi leNkosi ukuthi, thina babudlayo ubomi, ekufikeni kweNkosi, asisayi kubaphangela abalele ukufa
UPawulos usebenzisa igama elithi "thina" xa ukhankanya abo kuba besaphila ekufikeni kweNkosi, nto leyo ebonisa ukuba ayobe ngokusisiseko sele ingenzeka ngexesha uPawulos.
Yakobi 5: 8 - yibani ixesha elide kananjalo nokomeleza iintliziyo zenu, ngokuba ukufika kweNkosi kusondele
Track womhla uPawulos ukubuya olusondeleyo kweNkosi, kwaye ukhuthaza ibandla ukuba aphile elindele rhoqo uYesu, ivela emazulwini.
Xa sithetha lichaza ixesha esiphila kuwo, nikholwe ukuba isizukulwana eziya kufumana imbuyekezo kaNdikhoyo, kungenxa sithelekisa umlinganiswa lesiprofeto imbandezelo. Ngenxa imiqondiso siyakwazi ukubona ukuba iMini yeNkosi kuyeza, nokuba wayezala kwandisa.
Ngamanye amazwi, imiqondiso zangaphakathi nangaphandle abonisa ukuba 70 kanye ngeveki yokugqibela leminyaka siyasondela, kwaye ngaloo ndlela ke ayobe ibandla.
J esse Forest Silver, wabhala kwincwadi yakhe "Ukubuya SeNkosi wabhala Abaseki beCawa:" Baya kulindeleke ukubuya kweNkosi ngexesha lakhe. Babecinga ukuba ezinxulumene ixesha, njengoko uYehova wabafundisa ukuba sibe nesimo sengqondo uphaphile. (13)
UJohn F. Walvoord, umfundi wezakwalizwi umKristu ishwankathela ngale ndlela: "Into engundoqo ye-pre-trib emathangeni, ezizezi imfundiso yeNkosi imminenta kunye imbuyekezo ezinxulumene, kukho indima enkulu eCaweni ekuqaleni, owayehlala silindele rhoqo yeNkosi ozayo ngenxa yakhe ibandla. (12)
H istorien ibonisa ukuba noxa kukho ukunqongophala enkulu mbono, okanye spiritualization igama lesiprofeto phantse 1,000 iminyaka de koHlaziyo, ngoko ke imbali ibandla ukuba icawa kunye Abaseki yokuqala yaba ulindelo rhoqo 'uYesu uyeza.
Pre-millennialism, nto leyo ethetha ukuba ukubuya kukaYesu iya kuqhubeka phambi kwe Millennium ngokoqobo phantse yaphela emva kokuba iBhunga-Efese, ibhunga ngeemvaba ngowama-431 AD, kwagqitywa, kwaye zithathwa oku ngabawexuki. Kamva ngexesha noHlaziyo de sibone indlela aphinde waphila kwenziwe ilizwi lesiprofeto.
imfundiso Pre-trib iye systematized kwi 1800 nge uLizo John Xhosa, kodwa sithi akakho imfundiso phambi xesha, ukuze bathi "ukugwetyelwa ngokholo" wayengenguye mfundiso lokwenyaniso phambi uMartin Luther wafumana isityhilelo ngale nto. Ngokucacileyo ke abantu zishunyayelwe "ukugwetyelwa ngokholo" ngaphambi kokuba 1500, kodwa wasebenzisa iNkosi Martin Luther ngendlela ekhethekileyo ukuba zazise okubhalwe kule inyaniso ukukhanya. Ngendlela efanayo wenza noYohane Xhosa ngokwemiqathango ayobe kanye ukubuya kukaYesu.
Silindele ukubuya kweNkosi
P recis ukuba gama isibizela njengoko silindele uKuza kweNkosi. Asazi ukulinda ukuba abasebenzi abathile, okanye isiganeko esithile baya kuthi liqhagamshelene ayobe. UYesu angabuya nanini na, nto leyo nayo isibongozo nenkuthazo ukuba iNkosi yethu. Kulindeleke rhoqo ukuba uYesu unako ukubuya nanini.
Yaba uPawulos sentuthuzelo ibandla eTesalonika, kwaye ungathanda nje ukuba sisonwabiso kuthi. Silindele ukuba eze, ukuze ophule asisindise kuyo ingqumbo ezayo (1 Tesalonika 1:10)
"Abaseki Early Church"
Paul Boyer, Xa Ixesha yoba No More: Iinkolo Isiprofeto in Modern American neNkcubeko (Cambridge, MA: Belkndap Press, 1992), 75 iphepha
Paul N. Benware, Isiphelo Ukuqonda Times Isiprofeto, 1955 iphepha 197-198)
Tommy Ice, "Morgan Edwards: A Pre-Xhosa Rapturist," The Conservative Theological Jounal, 1997 iphepha 4-12.
Dave MacPherson, The Ongakholelekiyo Pre-Trib Origin, 1973
UMalusi Shepherd, Ikopi imibhalo complte of The Sherherd Shepherd ifumaneka kwi-Internet.
"St. uEphraem 'kwi Catholic Encyclopedia kwi Internet
Crutchfield "ithemba elinoyolo kunye Usizi Abaseki beCawa, page 88-101
Paul N. Benware, Isiphelo Ukuqonda Times Isiprofeto, 1995 iphepha 10-12
I-First Epistle of uClement, 23 (ebhaliweyo malunga 96 AD)
John F. Walsvoord, uXwilo Umbuzo eHlaziyiweyo kunye ezandisiweyo Edition, Zondervan, Grand Rapids, 1979, 51
Jesse Silver Forest, The yeenkosi Return, New York 1914, 62-63
Agcina ukusuka kwilixa "iphepha 221-222
D et Le isahlulo sesihlanu oluthi "ukubuya kukaYesu ngaphambi kwembandezelo," nto leyo ukuzilandulela ibe ayobe lomtshakazi kaThixo kunye nebandla phambi de kwiveki edlulileyo, kwaye Imbandezelo ufumana ekuqaleni kwalo.
Nangona ayobe yenye yezinto ukuya NT zeNdibano ezifihlakeleyo, ukuze sikwazi ukubona ngomsonto obomvu ngokusebenzisa imifanekiso kunye nemiqondiso GT. Esi sithuba kuthatha sisiqalo kwi amabali ukuba uEnoki, uLote, Rebecca noIsake, uRute, uRahabhi, UDaniyeli, kwaye kubonisa indlela uNdikhoyo enxulumene imbandezelo kunye yeNdibano. Siqala kwazo kunye ibali kaEnoki:
E Nok ke ngeendlela ezininzi i testamentlig Pre-shot omdala yeNdibano, nto leyo inokuba libhekisela zombini yokuzalwa ngokwayo; kodwa ixesha-indawo ayobe ibandla.
Ngaphandle ubuso ukufa
Hebhere 11: 5 - Ngokholo uEnoki wafuduselwa emazulwini ngaphandle ejongene nokufa. Kwaye ke wamfumana alafunyanwa isela, uThixo wayethabathe kuye ngokwakhe ngokuba.
E Nok wabanjwa ngaphandle nokudla ukufa kuba uThixo wayethabathe kuye ngokwakhe. Uphi UEnoki imodeli indima kwamnandi ebandleni abo babe sithembiso emangalisayo.
Ngaloo mini umntu nisisizukulwana esinyuliweyo, ezizalelwe ukubanjwa phezulu eNkosini, kodwa ukufa, yaye abo ngaphambili abalele ukufa, thina babudlayo ubomi, ahlale kuye, abanjiswe eNkosini ukuba sibonane naye ezulwini.
D et baba iintlobo ezintathu ezahlukeneyo abantu ababephila ngemihla kaNowa phambi wafika unogumbe. Yaba kwabangakholwayo abo ulicekisile ilizwi likaYehova, apho bonke zatshabalala onogumbe. Yaba uNowa nentsapho yakhe basindiswa ngenxa kwezikhukula ke uInoki lowo wathiwa xwi, wasiwa kuye iNkosi phambi wafika unogumbe.
Ngamnye ngendlela zabo bamele abo bantu iindidi ezintathu ezahlukeneyo ukuba bakwazi ukuthelekisa ne ixesha lethu namhlanje. In nje ngendlela efanayo sibona iintlobo ezintathu zabantu ngemini xa ezihamba imbandezelo kunye nesiphelo ixesha.
Abantu abo babamba
M änniskorna abo bafela unogumbe womhla kaNowa imele abangakholwayo, abo elingakhange lithathwe uYesu njengoMsindisi wabo. Abo bantu baya kungena imbandezelo, kwaye luboniswe ingqumbo kaThixo. Abo musa bakunyamekela oko ngentliziyo kwelo Bembandezelo baya kugwetywa nguYesu kwaye iya kuphoswa edikeni lomlilo lomlilo.
N oa imele amasalela akwaSirayeli ukuba iNkosi iya kugqiba izibhambathiso zazo zonyaka-1000 Empire. UNowa ndlela ahleliweyo akwaSirayeli, nto leyo ngendlela ethile ziya kukhuselwa ngethuba lembandezelo. 3.5 Iminyaka Bembandezelo uya amaYuda okholwayo ukuba asabe asinge entlango apho uYehova uya kubakhusela ukuba umchasi-nokutshutshiswa bakhe. UNowa sidlule kwezikhukula kwakhona kuya kuba yinxalenye yabantu yamaYuda ukuba.
Enoke umfanekiso yebandla
E Nok ngumfanekiso yebandla, ababengengabo inxalenye koMkhukula nomgwebo kaThixo xa uyabanjwa aze asiwe nguThixo phambi wafika unogumbe.
UEnoki wayephila kwixesha xa iNkosi kugwetywa ihlabathi. Xa kufikelelwe usukelo wesono, kwafika umgwebo kaThixo isono ngomhla kaNowa waza wathumela unogumbe, kodwa emva koko yena uEnoki sele xwi, wasiwa kuye uYehova. Lo mkhukula ngumfanekiso ingqumbo kaThixo uya kuthumela phezu komhlaba, yaye abantu abangendawo kumaxesha ekupheleni - ingqumbo ezayo (1 Tesalonika 1:10). Kanye njengokuba uEnoki, uya iNdibano kufuneka elixwiliweyo phambi vredenstid wayo uyaphuma phezu komhlaba.
2 Petros 2: 6-9 - The nemizi yaseSodom neGomora isohlwayo entshabalalweni. Wababeka uthuthu, wanika umzekelo oko kwakuza kwenzeka ababi. Kodwa ke wabasindisa uLote olilungisa, lowo bathuthunjiswe ubomi kunyeliswa ongendawo. - Ilungisa bahlala ezizezi phakathi kwabo, yaye imihla ngemihla, liwuthuthumbisa xa niyibonayo niyivayo yobubi bonke awabenzayo umphefumlo wakhe ulilungisa. - iyakwazi iNkosi ukubahlangula ekuhendweni abahlonela uThixo esilingweni ugcine ukubanjwa sikweni yaye abohlwaye kwada kwayimini yomgwebo. translation IsiNgesi: ukubahlangula ekuhendweni abahlonela isilingo
N nguPetros abhale kwaye ufundisa ibandla kwenye yeencwadi zakhe, usebenzisa umzekelo uLote ngere-, yaye kusinika umzekelo ngayo indlela iNkosi uyabasindisa abantu bakhe ngexesha kunye nendawo xa kufikwa imigwebo kaThixo kunye nexesha kwetyala ( ukusuka trial - eng translation).
Abraham ukhumbuza Nkosi
1 Genesis 18: 23-25 ​​- Wasondela uAbraham, wathi, "Uya ubhebhethe olilungisa kunye nongendawo Mhlawumbi kukho amalungisa amashumi mahlanu phakathi komzi Ngaba uyibhebhethe, ungayixoleli, loo ndawo ngenxa yamalungisa amashumi mahlanu?. apho? ukuba kude ukwenza into enjalo, ukuze ukuvumela zibhubha olilungisa kunye nongendawo. ngayo ngoko uza kuya ilungisa kunye nongendawo. ube kude, ngaba ebengayi lonke ihlabathi umgwebi ukwenza oko kulungileyo ? '
A iNkosi Braham ziyakhunjuzwa argument lwabo iSodom neGomora, oko kuchasene nemvelo yakhe ukutshabalalisa olilungisa kunye nongendawo.
Ngokusinika umzekelo uLote, ifundisa Petros, ukubonisa ukuba uLote akukho nenye yethutyana, kodwa umgaqo jikelele evela ngakwicala likaThixo, iNkosi "igcina ekuhendweni abahlonela lokulingwa"
UYehova kude kuLote town
D njengoko uYehova et wasindisa uLote umgwebo uya kuphuma phakathi komzi, ukuba wamqhuba ngokoqobo eSodom. Nkosi ayikwazanga nje musani ukugweba isixeko wenze into elide kangangokuba uLote ngokoqobo esixekweni.
ULote ngumfanekiso yebandla, nto leyo lithatyathwe kwixesha nendawo phambi ngoko ukuba izigwebo zikaThixo uyaphuma. Ngoko ke, ngamanye amazwi kwindalo yeNkosi ukuba olilungisa kunye nongendawo kugweba.
1 Genesis 17: 4 - "Yabona, nguwo lo umnqophiso wam unawe; uya kuba nguyise weentlanga ezininzi.
1 Genesis 17: 6 - Ndiya kukwenza etyebe kakhulu, yaye wenze iintlanga kuza kuwe, kuphume ookumkani kuwe.
E Saks ukuzalwa, yaba inzaliseko yezithembiso zikaThixo ku-Abraham. UYehova wathembisa uAbraham unyana uSara, yaye uAbraham yayiza kuba luhlanga olukhulu, yaye ube nguyise weentlanga ezininzi ngoIsake.
INkosi kuvavanya intliziyo ka-Abraham
N yi USara uneminyaka asithoba ubudala, kuzala, wathembisa unyana wakhe ebudaleni bakhe, kanye ngendlela uYehova wathembisa uAbraham noSara. UIsake ke ngoko kuphela komntwana wabo, ukuba uYehova wayeza azalisekise umnqophiso wakhe nezithembiso baKhe.
kamva Abanye ngexesha uzama iNkosi kwentliziyo ka-Abraham, uze umcele ukuba kuhamba uhambo lweentsuku ezintathu kude, ukuba bahlabele. idini elinyukayo esibingelelweni bekuya kuba uIsake, unyana kuphela intanda yakhe.
UIsake, umfanekiso kaKristu
N Abraham olithobelayo uNdikhoyo, ngokunjalo ke wonke isiganeko unesithunzi nje sodwa oko uThixo wakwenzayo emnqamlezweni kwiminyaka emalunga nama-2,000 kamva, yaye kukho eninzi yembali ukucebisa ukuba uIsake umfanekiso ocacileyo kaYesu Kristu;
* UNdikhoyo wabiza uIsake, "Unyana kuphela" ka-Abraham, nangona uAbraham sele wayenoonyana ababini ngelo xesha. Ngendlela efanayo, uYesu unyana okuphela kaThixo. (1 Genesis 22: 2)
UIsake wayeza kuba lidini kuloo ndawo apho uYesu amadini on Calvary ukuphakama. (1 mos 22:14)
Uhambo kwindawo yombingelelo Bekumthatha umntu iintsuku ezintathu, kanye njengokuba uYesu engcwabeni iintsuku ezintathu nobusuku bazo. (1 Genesis 22: 4)
UIsake bar ngokwayo iinkuni zedini elinyukayo ukuya kuloo ndawo, kanye njengokuba uYesu wathwala umnqamlezo indlela yakhe yokugqibela ukuba bawele. (1 Genesis 22: 6)
Abraham noIsake wahamba kunye sisonke, ngendlela efanayo ngendlela yokuba uYise noNyana yagqiba. (1 Genesis 22: 8)
UIsake ke ngoko umfanekiso ocacileyo uYesu, kunye nomsebenzi okwenzekileyo umnqamlezo Calvary. UAbraham wayethembele ngokupheleleyo eNkosini le meko, bakholwa kuThixo ukuba uIsake luzoqala kwakhona emva kwixhoba.
I uEliyezere umkhonzi - umfanekiso uMoya oyiNgcwele
1 Genesis 15: 2-3 - Wathi uAbram; "Nkosi, Nkosi, uya kundinika ntoni na? . Ukubona Ndiyemka ndingenamntwana; indlalifa yendlu yam nguElizere waseDamasko "uAbram wathi; "Yabona, mna akukwazanga nzala. Enye ongowendlu yam uya ilifa. "
S unifier xa uIsake ukufumana umtshakazi, uAbraham uthumela umkhonzi wakhe mdala bacoca yakhe, uEliyezere ukufumana umakoti uIsake, phakathi intsapho yakhe. Akukho lonke ibali kwiSahluko 22, sibona igama likaThixo umkhonzi. Kodwa ngo-1 Eksodus isahluko 15: 2 sifunda ukuba umkhonzi omdala-Abraham ogama noEliyezere, yaye ekuqaleni indlalifa endlwini ka-Abraham.
KuYohane 15: 26-27, sifunda izinto ezininzi ngaye uMoya oyiNgcwele. Yena yinxalenye uBawo, yaye ubungqina kaKristu. Kwakhona ongumkhonzi kunye uMoya wenyaniso.
Tjänaren Elieser är en bild på den helige Ande. Han hade blivit sänd av Abraham. Han var anonym och talade inte om sig själv, men vittnade för Rebecca, den kommande bruden, om Isak. På samma sätt talar den helige Ande inte om sig själv, men pekar och vittnar om Jesus till församlingen. Elieser möter Rebecca vid vattenbrunnen, som kan vara en bild på den helige Andes utgjutande i våra liv. Själva namnet Elieser, betyder på samma sätt som den helige Ande ”tröstare”.
Rebecca – Kristi brud
På samma sätt som att Isak är en bild på Kristus, och tjänaren Elieser är en bild på den helige Ande, är Rebecca en förebild på församlingen, Kristi brud.
Rebecca ovela kwisixeko enye Abraham, ngubani na ke walala eBhabheli. IBhabhiloni ngumfanekiso kwalo eli hlabathi; ngubani na ke Ibandla yaye kwathathwa ngaphandle. Rebecca naye isalamane ka-Abraham, yaye iyafana onke amaKristu, ethetha ngokomoya, imbewu ka-Abraham. (ERoma 4:16)
Rebecca bafumane izipho bakwaEliyezere xa adibana naye, athe uMoya oyiNgcwele ngendlela efanayo, iNdibano lezisa ngokuthanda kwabo. Kwathi nakuRebheka, akubon wathetha kumkhonzi, yena ubaleka ekhaya kwaye isixelela yonke uye wabona kwaye babe namava. umsebenzi Assembly kukuba aphume uze uthethe ngayo "iindaba ezilungileyo", singqine konke uYehova asenzele ebomini bethu.
T jänaren uEliyezere ifika ngokuhlwa ukuya equleni edolophini apho uRebecca ubomi. Ubusuku ufuzisela disorder, chaos kunye ukudideka, apho ubusuku buyeza, nto leyo umfanekiso imbandezelo iMini yeNkosi.
Siyibona ngendlela efanayo-1 Genesis 24:63, apho uIsake idibana umtshakazi wakhe elizayo ngorhatya. Uya kufumana naye, yaye uzisa kuye ententeni kanina, apho uRebecca uba ngumfazi kaIsake.
A niyintombi enyulu
V ukuze bafunde ukuba uRebecca i intombazana eselula, ngubani akukho namnye usondele (1 okubizwa 22:16). Ngokufanayo, ibandla koKristu niyintombi enyulu kuKristu, eganelwe indoda enye.
Ekupheleni kwebali, omnye okubizwa 24: 62-67, siyabona ukuba uIsake (umyeni) ubuyela ngokuhlwa, ngaphambi ebusuku (Bembandezelo), noEliyezere (uMoya oyiNgcwele) uza ukuzisa (noxhwilo) Rebecca (umtshakazi) ukuhlangabezana uIsake ubuso ngobuso okwesihlandlo sokuqala. Ngokufanayo, uMoya oyiNgcwele, ukuba uncothule ibandla, ngokuhlwa, ngaphambi ebusuku wayo nembandezelo luqala, kwaye uya kubona uze kumkhawulela uYehova umyeni yethu okokuqala.
Joshua 1:. 2 - "Akanjalo umkhonzi wam uMoses kwabafileyo Ngoku, uyiwele iYordan le, wena naba bantu bonke, niye kwelo zwe ndibanika lona oonyana bakaSirayeli.
H istorien kaRahabhi imiselwe kwiminyaka malunga 500 emva kokuba uIsake Rebecca kwiGenesis Isahluko 1 24. Ngokwembali, lukhulu kuwahlele amaSirayeli ngeli thuba.
AmaSirayeli afumana ithuba kubukhoboka baseYiputa, kwaye kwangoko wakhululwa ngendlela engummangaliso uNdikhoyo wabasindisa abantu baphuma ebukhobokeni ngoMoses. Emva kokuba amaYuda abehamba entlango iminyaka engama-40, babehamba kaNdikhoyo kuYoshuwa, owayeza kukhokela abantu soyisa utshaba uthabathe kwilizwe ledinga wathembisa ukuba ezathenjiswayo nguThixo.
iintlola ezimbini aseJeriko
Jos 2: 9 - "Ndiyazi eli lizwe ukuba uYehova uninikile nokuba yokoyika kwakho siwelwe luqhiphuko-mbilini ngani; nokuba bathe amandla bonke abemi ukoyika ngenxa yenu.
Xa efore uSirayeli anaso iYeriko, iintlola ezimbini bathumela ndeye kulihlola ilizwe nesixeko saseYeriko. Iintlola ezo lufunda yaye befuna ikhusi ihenyukazi uRahabhi, lo ubusithelisayo iintlola ezimbini abantu besixeko ababekhangela amadoda.
URahabhi bathi ukholo lwakhe nokuqiniseka yakhe Scouts, uThixo kaSirayeli ilizwe lona. Ucela kutheni Scouts ukumnika isithembiso wokhuseleko, kokubini yena kunye nentsapho yakhe ngomhla amaSirayeli ithatha sixeko.
E TT umtya ebomvu kwi window, bekuya kuba umqondiso ukuba apho URahabhi nentsapho yakhe babehlanganisene. Xa amajoni Israeli wabona umtya, ulayishwe ezantsi kwaye wabasindisa URahabhi nentsapho yakhe ekutshatyalalisweni kanye njengoko wayethembisile iintlola.
A umfanekiso yebandla
S Kokan URahabhi ngumfanekiso yebandla. Yena lamaqaba, ihenyukazi kunye umoni ovumayo ukholo lwakhe kuThixo kaSirayeli. Yena usikhathalele, xa uziva ukuba abantu zamaYuda, nto leyo isizathu sokuba usindiso lwayo.
EJeriko umfanekiso eli hlabathi, apho igcinwa khona. URahabhi (Assembly) iyasuswaName neJeriko (World), phambi kokuba ke ukuba isixeko watshabalalisa amtshisa (Bembandezelo)
R incwadi uts ebizwa ngokuba "kwetu Love Ibali," yaye imalunga uNahomi, umfazi umYuda evela eBhetelehem bafelwa ilizwe labo ngenxa yendlala kwaSirayeli, yaye emva koko kwanyanzeleka ukuba abhacele kwaMowabhi (Jordan).
Kungekudala emva koko, umyeni wakhe uyasweleka kwaye simshiya kuphela namahlwempu kwilizwe lasemzini. Emva kokuba ithuba indlala uNahomi wabuyela eBhetelehem nentombi yakhe uRute, ngubani wafungayo soze amshiye. URute umfazi wamaMowabhi abezeke omnye koonyana uRute naye abulawe. Xa bobabini emva eBhetelehem, ngoko ukuba ungumYuda, nakumaGrikekazi, uBhohazi, wayethandana uRute atshate naye.
Genom lagen om återlösning och giftemål, så upplever både Noomi och Rut förlösning, och Noomi får tillbaka sin mark hon hade förlorat.
En bild på församlingen
Historien om Rut är en fantastisk berättelse om förlossning, frälsning och återlösning, men ger också en symbolisk bild på församlingen och vedermödan.
Noomi är en bild på Israel, och Rut är en bild på hedna-församlingen som blir gift med förlösaren, den judiska mannen Boas, som är en bild på Messias. Noomi var tvungen att fly från sitt land på grund av hungersnöd, på samma sätt som Israel blev utkastade från sitt land för 2000 år sedan. Församlingen fick del av Messias genom troende judar, samtidigt som förstockelse drabbade en del av Israel (Rom 11:25).
Endleleni eya ngentlawulelo (uNahomi) uSirayeli, ngoko uthabathe uMesiya kumtshato lobuhedeni (Rute). UBhohazi uyawukhulula kwaye igcina uRute noNahomi kwi imeko sele, kwaye iseka ekugqibeleni uSirayeli (uNahomi) ngokupheleleyo.
S amtidigt kunjalo ibali uRute, umfanekiso webandla ukuba uYehova ngumsindisi ukubaleka nembandezelo.
Sifumana meko zintathu kwisahluko ezithathu lungakungqina oku. Okokuqala, uRute wehla waya tröskeplatsen njengoko uninazala embuza. Okwesibini, uBhohazi wavuka waza wafumana URute ngexesha zobusuku xa wafuna indawo yokusabela naye. Okwesithathu, uRute wafumana imvume ukuzimela phantsi ingubo Boas , ngubani twabulula isondo lengubo yakhe phezu kwakhe, noBhohazi waba uMkhululi wakhe ngobu busuku.
Tröskeplatsen - A umfanekiso yembandezelo
T röskeplatsen ngumfanekiso womgwebo nembandezelo esijongene kwiindawo eziliqela zombini OT kunye NT (Amosi 1: 3, uIsaya 21:10, 41: 14-16, ISityhilelo 14: 19-20).
Ubusuku kunye kusasa kwakhona umfanekiso zombini Bembandezelo, woMgwebo kunye nokubuyiselwa. UYesu wathetha ubusuku ezayo apho kungekho namnye unako ukusebenza (Yohane 11: 9), kunye uPawulos ulumkisa ukuba imini yeNkosi, nto leyo ixesha yomgwebo iya kufika njengesela ebusuku (1 Tesalonika 5: 2).
Ngexesha Boas ingubo yokhuselo
URute 3: 9 - "Ungubani na?" Wabuza yena. waphendula wathi: "NdinguRute, umkhonzazana wakho. Gcobisa manteflik yakho phezu komkhonzazana wakho, ngokuba ungumkhululi wam.
R ngaphandle kwafuneka ukuba ukuzimela phantsi Boas ingubo ngasezinyaweni zakhe de ebusuku wayongamele kwaye kwasa kwakhona.
Ngendlela efanayo, uYehova uza kubakhusela kuzimela ibandla lakhe ngexesha lifezeke ixesha lengqumbo, ubusuku elandelayo, kude ubumnyama dissipated kunye ekukhanyeni kwengomso. indawo Assembly ebudeni bembandezelo, uya kuba phantsi yokwaleka kaYehova, kwiYerusalem yasemazulwini, naphantsi ukusekelwa kwamagumbi zesibhakabhaka.
Yiza abantu bam, baye ezingontsini zakho
UIsaya 26: 17-21 - Njengoko umfazi ngakhululeki ekhulelwe xa ithe eza kuzala, baze badanduluke intlungu yabo, ngoko ke kuwe, Nkosi Yehova. We wamitha, azibhija, kodwa wazala ngumoya. Asikhange efunyenwe usindiso ilizwe, yaye akukho namnye umntu azalwe ukuba baphile emhlabeni. Kodwa Abafileyo bakho baya kuphila; izidumbu zabo ziya kuvuka. Wake up and ukucula, nina bahlala eluthulini; kuba ngumbethe wezikhanyiso umbethe wakho kombethe ukukhanya, nehlabathi liya siphele nabafileyo. Yiza abantu bam, baye ezingontsini zenu, nivale iingcango emva kwenu. Fihla wena umzuzwana emfutshane bada benyuka ubushushu egxothiweyo. Kuba, yabonani, uYehova uphuma endaweni yakhe, ukuze kubohlwaya abemi behlabathi ngenxa yobugwenxa babo. Umhlaba uza ungabutyhili amatyala igazi labo kunye engasekho ukufihla ababuleweyo bawo.
D et esi sahluko sikaIsaya iqulathe iivesi ezimangalisayo ungangqini ubungqina kuYehova Ngubani na oya kundimema abantu bakhe, asuke abusithelise kwaye ulondoloza amagumbi abo ngokunxulumene ingqumbo ixesha elimiswe ehlabathini.
Asikwazi ukubona ukuba lo sicatshulwa evela Isaya ake ziye zazaliseka. Ayizi kwakhona akuvumelani yovuko wayebashumayeza iindaba ezilungileyo zikaYesu, noDaniyeli uxelela Dan 12: 2, apho siyazi kuya kwenzeka emva kokuba imbandezelo hayi ngaphambili. Apha uthetha uIsaya endaweni ukuvuselwa lokuqala lwenzeka xa uNdikhoyo ubiza abantu baKhe ezingontsini zakhe, naphambi naphambi kokuba ingqumbo kaThixo kunye izigwebo uyaphuma phezu komhlaba.
ISityhilelo 12: 1-6 - A Uphawu enkulu uvele emazulwini: umfazi ethiwe wambu ngelanga, inyanga ingaphantsi kweenyawo zakhe, nesithsaba seenkwenkwezi ezilishumi elinambini phezu kwentloko yakhe. Ekhulelwe, wamemeza kabuhlungu ukuba kusinda.
P ngendlela efanayo njengoko uIsaya, uYohane abone umfazi ngokunxulumene ixesha lesiphelo okhulelwe inenimba. Ibandla akaze thaca njengomfazi ozalayo eBhayibhileni, kodwa yenza Kwelinye icala, uSirayeli. Umfazi ngumfanekiso zombini amaYuda bukaMesiya ngexesha likaYesu, yaye amaYuda onguMesiya ngexesha lembandezelo.
USirayeli okuzala ezintathu analo ukuya ngaphambi kokuba aye kungena ebukumkanini kunyaka 1000. Zontathu ezi zizalwa zichazwe kuIsaya isahluko 66:
UIsaya 66: 7-8 - Phambi eZiyon nimazile umntu onenimba, athe ke wazala umntwana (Yesu). Ngaphambi kokuba kufike yinimba phezu kwakhe, athe ke wazala umntwana oyinkwenkwe. Ngubani na okhe weva into enje? Ngubani na okhe wabona into enje? Ngaba ilizwe ukuba ebomini ngosuku olunye (1948), okanye uhlanga kuzalwa ngaxeshanye (usindiso lukaSirayeli), kuba eZiyon uzale abantwana babo sele xa kuqala inimba?
Ngoko ke, ngokunxulumene nenkxamleko uSirayeli uya kufumana, kwaye phambi kokuba ingqumbo kwexesha, uYehova uya ubayeke abafileyo bayavuswa, yaye uya kubiza abantu bakhe kuye, ukufihla ezingontsini zayo.
UYohane limele le ibandla eziya kufumana efanayo ngomhla uppryckandets. Ngokusebenzisa umyalelo, ilizwi lesiphatha-zithunywa, inexilongo likaThixo, ibandla uya waxwilwa, wada wasiwa ezulwini, uya kubona imbandezelo zenzeka umhlaba.
H istorien malunga uDaniyeli amadoda amathathu ezikweni lomlilo, yenye amabali GT ukuba ubonisa umfanekiso ocacileyo imbandezelo kunye nokuzaliswa elizayo.
UDaniyeli ke shi eschatology, amaphupha, imibono yaye uye waba yintoni isiphelo ixesha. Ngokungafaniyo kwiNcwadi yeSityhilelo, nto leyo inkcazelo eneenkcukacha yembandezelo, esukela uDaniyeli phezu esifaneleyo elide kakhulu, zombini umva phambili kwexesha.
UDaniyeli - umfanekiso lebandla
H istorien malunga uDaniyeli nabahlobo bakhe abathathu, ithatha indawo ekuqaleni ekuthinjweni eBhabhiloni, apho bonke abantu abane akhonze phakathi ukumkani waseBhabhiloni.
Kanye njengoko uYosefu, uDaniyeli uba kwaphakanyiswa kwisikhundla kuphela ukumkani emi phezu kwayo. KwiSityhilelo, ibandla wabamisela ukuba babe ngababingeleli nookumkani kulo mhlaba. Into eza kugqitywa kwiMillenium. Ngaloo ndlela, lo Daniyeli umfanekiso ebandleni.
Umatshini we Umchasi
K Young Nebhukadenetsare, nto leyo Umzekelo ocacileyo Umchasi, awayebubeke up oqingqiweyo wegolide kwithafa laseDura eBhabhiloni. It Qaphela, ukuba mfanekiso ziikubhite ezimashumi eliphezulu ziikubhite ezintandathu ububanzi, leyo kunokufaniswa intetho umchasi 666th
UNebhukadenetsare ukunyanzela wonke nikhahlele ninqule lo iseti oqingqiweyo, apho kwenzeka abo ndigqithe babeza kuphoswa ezikweni elivutha umlilo. Ezikweni elivutha ngumfanekiso ingqumbo kaThixo, olokuxina enkulu kwimbandezelo.
Kuphoswa ezikweni elivutha umlilo.
UMalaki 4: 1 - Yabona, kuza imini, lona livutha njengeziko.
S adrak, noMeshaki, noAbhede-nego akazange kuqubuda oqingqiweyo likaNebhukadenetsare, yaye aphoswa ezikweni elivutha umlilo.
Ukumkani wayalela ukuba iziko malibaswe ngokuphindwe kasixhenxe kunokuba endakha ndayibona ukuba, kwaye kukho umfanekiso intetho yogqibelelo. UYehova wathumela isithunywa sakhe owakhusela ooShedreki noMeshaki noAbhednigo kwelo ziko lomlilo, baphuma ngaphandle nawuphi na umonakalo okanye ifuthe emlilweni.
M nye ecela umbuzo kweli bali kulapho uDaniyeli ethile. Ngaba omnye abo baguqa kwedolo ukuya nomfanekiso? Kutheni na ke ukuba kuyo, yaye kutheni na nayo kuphoswa ezikweni lomlilo?
Sinokuba ngokufanelekileyo ezithile ukuba uDaniyeli angagobanga kwedolo ukuya oqingqiweyo likaNebhukadenetsare. UDaniyeli nje khona apho wonke umntu uya kunqula umfanekiso oqingqiweyo, okanye kwelo ziko ovuthayo ukubandezeleka. UThixo waba "umthathile."
B eskrivningen njengoko ukumkani la madoda ezikweni lomlilo kukuba kwakukho amadoda amathathu yamaYuda (Dan 3:12). Amadoda amathathu lwamaJuda, ngamanye amazwi, umfanekiso yabanyulwa kaSirayeli, yaye uDaniyeli umfanekiso ebandleni.
Daniyeli (Assembly), intanda (Daniyeli 10:11), zigcinwe ukususela ngexesha kunye nendawo xa kufikwa ezikweni lomlilo (imbandezelo), ngelixa nabahlobo bakhe abathathu (uSirayeli intsalela), igcinwe embindini kunye nge trängslen.
G eNom la mabali kaEnoki, uLote, Rebecca noIsake, uRute, uRahabhi, noDaniyeli, siyakwazi ukubona ipateni ephethe intsontelo ebomvu.
Sibona iziganeko lokomfuziselo ebonisa uze walathe zoku-, ixesha Assembly esiphila kulo. Apho sikwazi ukubona ukuba iNkosi ayiyi babalise ngendlela efanayo kunye iCawa, nto ayenzayo namaSirayeli. Zombini usindiso amaqela iNkosi linesicwangciso ekhethekileyo, apho uya kukufeza. UYehova uya kukugcina uSirayeli owahanjiweyo Umchasi kunye imbandezelo, aya kugqiba iminqophiso zabo nezithembiso nge.
izicwangciso kaThixo ibandla lakhe
P ngendlela efanayo, iNkosi yabalula ukugqibezela izicwangciso zakhe umzimba wakhe kunye nomtshakazi, ibandla likaThixo. Usizi lo awenzelwa ukuba umtshakazi weNkosi, ngoko kutheni uYesu uza ukulanda kwaye susa umtshakazi phambi ngoko ukuba izigwebo zikaThixo uya kuphuma phezu komhlaba.
Ibandla ke onokusindiswa ngexesha kunye nendawo xa kufikwa imbandezelo nomgwebo wokugqibela. ithemba elinoyolo, uThixo wethu, neNkosi yethu uYesu Kristu, uya kusisindisa umgwebo.
Nceda ndwendwela Miakel Walfridssons blog: